Posted by ချော(အစိမ်းရောင်လွင်ပြင်) at Saturday, June 23, 2012 Saturday, June 23, 2012 Labels: စားသောက်ဖွယ်ရာ
ဒီတစ်ပတ် အားလပ်ရက်မှာ ချက်စားဖို့ လွယ်လွယ်ကူကူ အရသာရှိရှိ ဟင်းတစ်မျိုးကတော့ မိုးလေး ခပ်အးအေးနဲ့ နာနတ်သီးတွေ ပေါစပြုပြီဖြစ်တဲ့ ဒီရာသီမှာချက်ဖို့အဆင်ပြေလှတဲ့ နာနတ်သီး ဝက်သားချက် ပါ။ ထူးထူး ဆန်းဆန်း မဟုတ်ဘဲ ဝက်သားကို ချက်နေကျ နည်းအတိုင်းချက်ပြီး နာနတ်သီးကို ထည့်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။
မထူးဆန်းတဲ့ ဝက်သားနာနတ်သီးချက်နည်းကိုဘဲ ပြောပြရမယ်ဆိုရင်
နာနတ်သီးများကို မိမိထည့်လို့တဲ့ ပမာဏအတိုင်း အတုံးလေးများ တုံးထားလိုက်ပါတယ်။
ဝက်သားကို အဆီအခေါက် အသားပါတဲ့ သုံးထပ်သားကို အရွယ်တော်အတုံးလေးများ တုံးပါတယ်။ ထို့နောက် ဆား၊ အရသာမှုန့်၊ ဝိုင်ဖြူအနည်းငယ်၊ ငံပြာရည်၊ ကြာညှို့အနည်းငယ်တို့နဲ့နယ်ပြီး နာရီဝက်ခန့်ထားလိုက်ပါတယ်။
ဟင်းထဲထည့်ရင် မွှေးအောင် နံနံစေ့ကို ရေဆေးပြီး ထောင်းထားတာပါ။ (ဒါကတော့ ရှိလို့ထည့်တာပါ ။ မရှိရင် မထည့်ဘဲနေလို့ရပါတယ်)
ဂျင်း၊ ကြက်သွန်ဖြူ၊ ကြက်သွန်နီ စောစောက ထောင်းထားတဲ့ နံနံစေ့တို့ကို ဆနွင်း၊ အရောင်တင်မှုန့်၊ ငရုပ်သီးကြမ်းမှုန့် တို့ဖြင့် ဆီသတ်ပါတယ်။ အနှစ်များများရဖို့အတွက် ကြက်သွန်ဖြူနီကို များများထည့်ပါတယ်။
ဆီသတ်ထားတာ မွှေးလာပြီဆိုရင် ဝက်သားကိုထည့်ပြီး မွှေလိုက်ပါတယ်။
ရေထည့်ပြီး ဆား၊ ငံပြာရည်၊ အရသာမှုန့်တို့ကို လိုအပ်သလိုထည့်ကာ အဖုံးအုပ်ပြီး ဝက်သားများ နူးအောင် နပ်ထားလိုက်ပါတယ်။
ရေခန်းပါက ဝက်သားမနူးသေးရင် ရေထပ်ထည့်ပြီး နူးအောင်ချက်ပါ။
ဝက်သားနူးတဲ့အခါ စောစောက နာနတ်သီးအတုံးများကို ထည့်လိုက်ပါတယ်။ ရေထပ်ထည့်ပြီး တစ်ရေခန့် ခန်းသွားအောင် မီးပေါ် ဆက်တည်ထားလိုက်ပါ။
ရေခမ်းသွားပြီး ဝက်သားလည်းနူး၊ နာနတ်သီးလည်း အိလာပါပြီ။ အရသာမြည်းပြီး စိတ်ကြိုက်ဖြစ်ရင် ချလို့ရပါပြီ။ ဝက်သားရဲ့ အရသာက နာနတ်သီးထဲဝင်၊ နာနတ်သီးအရသာက ဝက်သားထဲကိုဝင်သွားပြီး အရသာဟာ ထူးခြားကာင်းမွန်လှပါတယ်။
ချဉ်ချိုချို အရသာလေးနဲ့ အရသာ အမူထူးတဲ့ ဝက်သားနာနတ်သီးချက်ပါ။
သူ့အနှစ်ကိုလည်း ထမင်းဖြူလေးနဲ့ နယ်စားမယ်ဆိုရင် ကောင်းမှကောင်းပါဘဲလို့.. :P
အားလုံးဘဲ ပျော်ရွှင်သော အားလပ်ရက်များကို ပိုင်ဆိုင်ကြပါစေရှင်..
Posted by ချော(အစိမ်းရောင်လွင်ပြင်) at Wednesday, June 20, 2012 Wednesday, June 20, 2012 Labels: ထူးဆန်းထွေလာ
သင်ဟာ ဦးထုပ်ဆောင်းရတာ နှစ်သက် သဘောကျသူတစ်ယောက်ဆိုခဲ့ရင် ကမ္ဘာပေါ်က ထူးထူးဆန်းဆန်း လှလှပပ တီထွင်ချုပ်လုပ် အလှဆင်ထားတဲ့ ဦးထုပ်တွေကို ဖော်ပြချင်ပါတယ်။
ဒီဇိုင်နာ Kentucky Derby ရဲ့ လဘ္ဘက်ရည်သောက်ချိန်လို့ နာမည်ပေးထားတဲ့ ဦးထုပ်ပါ။ ဒီလိုဦးထုပ်မျိုးကတော့ မိမိကိုယ်တိုင် လုပ်ဖို့ လွယ်မယ် ထင်ပါတယ်။ အိမ်မှာရှိတဲ့ လဘ္ဘက်ရည်ခွက်နဲ့ အသီးအနှံတစ်ချို့တွေကို ဦးထုပ်မှာ ကပ်ထားလိုက်ရုံပါဘဲ။ အပြင်သွားနေတုန်း ဗိုက်ဆာရင်းလည်း ဦးထုပ်ကနေ ဖြုတ်စားလိုက်ရုံဘဲပေါ့လေ။ :P
ဒီဇိုင်နာ Phillip Treacy ရဲ့ ညှို့အားပြင်း ဦးထုပ်လို့ ဆိုပါတယ်။ မျက်စိရှေကကွယ်နေတဲ့ အမွှေး အမျှင်တွေက အမြင် အာရုံကို ရှင်းလင်းစေရဲ့လားတော့ မသိပါ။
ချစ်စရာ့အနက်ရောင်ပိုက်ကွန် ဦးထုပ်ပါတဲ့။ ပင်လယ်ထဲငါးဖမ်းချင်သူများ ပိုက်မရှိရင်သူ့ဆီငှားလို့လည်း ရနိုင်ကောင်းပါတယ်လေ။
ဒီဇိုင်နာ Kentucky Derby ရဲ့ ကြက်တူရွေးဦးထုပ်ပါ။ ဒီပုံထဲက ကြက်တူရွေးကတော့ ငှက်မွှေးလေးတွေနဲ့ ပြုလုပ်ထားတာပါ။ တကယ်လို့ဒီလိုဦးထုပ်မျိုးကို သဘောကျလို့ ဆောင်းချင်ရင်တော့ လွယ်လွယ်ကူကူ ကြက်တူရွေးတစ်ကောင်ကို ခေါင်းပေါ်သာာ တင်သွားလိုက်ပါ။ ခုထက် ပိုစမတ်ကျပါလိမ့်မယ်။ :P
ထူးဆန်းထွေလာဦးထုပ်ကမ္ဘာ လို့ အမည်ပေးရလောက်အောင် ခေါင်းပေါ်မှာ ဝက်သားတုတ်ထိုးလိုလို စလောင်းငယ်လေးတွေလိုလိုနဲ့ ထူးထူးဆန်းဆန်း အလှဆင်ထားတဲ့ ဦးထုတ်ပါ။ မိမိကိုယ်တိုင် ဒီဇိုင်း ထွင်မယ်ဆိုရင်တော့ ဝက်သားတုတ်ထိုးလေးတွေကို ခုလို စီပြီး ခေါင်းပေါ်မှာ တင်ထားလိုက်ရင် လူစိတ်ဝင်စားဖွယ် ဦးထုပ်တစ်လုံးကို ရမှာဖြစ်ပါတယ်။
ခေါင်းပေါ်မှာ လင်ပန်းကြီးတစ်ချပ် ရွတ်ထားသလား ထင်ရလောက်အောင် ကြီးမှားလှတဲ့ ဦးထုပ်ပါ။ ဒီထက်ပိုလှချင်သူများကတော့ လင်ပန်းတစ်ချပ်သာ ခေါင်းရွက်သွားလိုက်ရင် အဆင်ပြေသွားမှာပါ။ :P
ဒါကတော့ လှလှပပ မိန်းမပျိုလေးတွေ ဆောင်းတတ်တဲ့ ဆောင်းရာသီဦးထုပ်လို့ ဆိုပါတယ်.
ဦးထုပ်မှာ အလှဆင်တဲ့ ပန်းတွေက ဦးထုပ်အပေါ်မှာ ရှိရမဲ့အစား ဦးထုပ်အောက်မှာ ရှိနေတာမို့ ပန်းတွေ အဆုပ်လိုက်ကြီး ပန်ထားတာနဲ့တောင် တူနေတဲ့ ဦးထုပ်ပါ။
ဒီဦးထုပ်ကတော့ ငန်းကြီးတစ်ကောင်လုံးကို ခေါင်းပေါ်တင်ပြီး အပြင်ထွက်တဲ့ စတိုင်ပါ။ မိမိအိမ်မှာ မွေးထားတဲ့ ဘဲတစ်ကောင်ဖြစ်ဖြစ်၊ ငန်းတစ်ကောင်ဖြစ်ဖြစ် ခေါင်းပေါ်တင်ပြီး အပြင်ထွက်ရင်လည်း ဒီစတိုင် အတိုင်း ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ အပေါ်က အကောင်က ချေးပါချရင်တော့ မိမိဒေါသနဲ့ မိမိသာဖြစ်ပါတယ်။ :P
ဒီပုံကတော့ ပိုလိုကွင်းကြီးတစ်ခုရဲ့ စတိုင်နဲ့ အမိုက်စား ဦးထုပ်ဒီဇိုင်း ဖြစ်ပါတယ်။
စာမရီငှက်တစ်ကောင်ရဲ့ အမွှေးတွေနဲ့ တူတဲ့ ဦးထုပ်ပါ။
ဒီဦးထုပ်ကတော့ လှလှပပ ချစ်စဖွယ် သတို့သမီးလေးတွေနဲ့ လိုက်ဖက်တဲ့ နှင်းဆီတစ်ပွင့် ဦးထုပ်ပါ။
ကိတ်မုန့်တုံးကြီးဘဲ ခေါင်းပေါ်တင်ထားသလိုလိုနဲ့ ကြည့်ရတာ အင်မတန်မှ လေးမဲ့ပုံရှိတဲ့ ဦးထုပ်ပါ။ ဒါကတော့ မိမိကိုယ်ကို ဒုက္ခခံချင်သူတွေ ဆောင်းတဲ့ဦးထုပ်ဖြစ်ပုံရပါတယ်။
ပန်းပွင့်၊ ပန်းနွယ်တွေနဲ့ အလှဆင်ထားတဲ့ ပန်းတွေနဲ့ဝေ ဦးထုပ်ပါ။
ဒီဦးထုပ်ကတော့ ခေါင်းပေါ်မှာ ကပ်မနေဘဲ လေထဲမှာ ဝဲနေဟန်ရှိတဲ့ ဦးထုပ်ပါ။
ဦးထုပ်အရောင်လေးက ချစ်စရာ၊ စားချင်စရာကောင်းတဲ့ ချစ်စရာချောကလက် ဦးထုပ်ပါတဲ့၊
ဝီလျှံရဲ့ ကြင်ယာတော်လေး ဆောင်းတဲ့ ဦးထုပ်ဒီဇိုင်းပါ။ တော်ဝင်သူများအတွက် အထူးချုပ်ထားတဲ့ ဦးထုပ်ဖြစ်ပါတယ်။
အားလုံးဘဲ ပျော်ရွှင်ချမ်းမြေ့ကြပါစေရှင်။ ဒီရက်ပိုင်း စာမရေးအားတဲ့အတွက် အပျင်းပြေကြည့်ဖို့ ပုံတွေ များများတင်လိုက်တာ ဖြစ်ပါတယ်။
Links to this post 20 comments
Posted by ချော(အစိမ်းရောင်လွင်ပြင်) at Sunday, June 17, 2012 Sunday, June 17, 2012 Labels: ရသစာစုများ
ငါးမျှားတံကို ရေထဲချလိုက်တဲ့အချိန်မှာတော့ ရော့ကီးတောင်တန်း ထိပ်ဖျားပေါ်က ရေခဲဖုံးတောင်ထွတ်တွေရဲ့ အရိပ်က ရေကန် မျက်နှာပြင်ပေါ် ရောင်ပြန် ဟပ်လို့ နေခဲ့သည်။ ဒီနေရာလေးကို လွန်ခဲ့သော နှစ်များစွာကတည်းက ကျွန်မရဲ့ ဖေဖေနဲ့ အကြိမ်ပေါင်းများစွာ ရောက်ခဲ့ရဖူးပါသည်။ ခုလဲ ရောက်လာရပြန်ပါပြီလေ … ရော့ကီး တောင်တန်းတွေ တည်ရှိရာ အမျိုးသားပန်းခြံတွင်းက အလွန်လှပတဲ့ ရေကန်ကြီးရဲ့ ကမ်းနှဖူးမှာ ငါးမျှားဖို့ ပြင်ဆင်နေမိရင်း ကျွန်မရဲ့ အသိစိတ် လိပ်ပြာလေးက အတိတ်လွင်ပြင် ကို တောင်ပံခတ်ကာ ပျံသန်းလို့ သွားမိတော့သည်။
ဒီနေရာလေးမှာပါဘဲ.. ကျွန်မကို ဖေဖေက ငါးမျှားနည်းကို စပြီး သင်ပေးခဲ့သည်လေ.. ငါးမျှားတံမှာ ငါးမျှားကြိုးကို ဘယ်လို ချည်ရမည်၊ ဘယ်လို ငါးမျှားကြိုးကို သုံးရမည်၊ ဘယ်လို ငါးစာကို ရွေးချယ်ရမည်၊ ငါးမျှားချိတ်မှာ ငါးစာ ဘယ်လိုတပ်ရမည် ဆိုတာတွေကအစ ငါးမျှားချိတ်မှာ ငါးလာတွတ်ပြီး ဘယ်လောက်အကြာမှာ ငါးမျှားတံကို ဆတ်ခနဲ အပေါ်ကို ရုပ်ရမယ်ဆိုတာက အဆုံး အသေးစိတ်ကို စိတ်ရှည်လက်ရှည် သင်ကြားပြသပေးခဲ့ဖူးပါသည်။
ငါးမျှားဖို့ နေရာ သေချာရွေးချယ်တတ်ဖို့ကိုလဲ ဖေဖေက ကျွန်မကို အကောင်းဆုံး သင်ကြားပေးခဲ့ သည်ပါဘဲလေ… ဖေဖေ ရွေးချယ်ပေးတဲ့နေရာက နက်ရှိုင်း မဲမှောင်နေပြီး တည်ငြိမ်သော ရေပြင်ရှိသည့် ကြီးမားလှသော ကျောက်ဆောင်ကြီးနဲ့ နံဘေးနေရာ..
" ဒီနေရာမှ ငါးမျှားကြိုးကိုချ " ဖေဖေက ကျွန်မကို ပြောလိုက်သည်။
" ဘာလို့လဲဖေဖေ "
" ဒီနေရာမှာ သမီးအတွက် အကောင်းဆုံးနဲ့အကြီးဆုံး ငါးရှိနေတယ်.. "
" ဖေဖေက ဘယ်လိုသိတာလဲ"
"ဖေဖေပြောသလိုသာ လုပ်ကြည့်ပါသမီးရယ် "
ဖေဖေညွှန်ပြသည့် နေရာမှာဘဲ ကျွန်မရဲ့ ငါးမျှားတံကို အတိအကျ နေရာ ချလိုက်တော့ အစာတတ်ထားသည့် ငါးမျှားချိတ်လေးက နက်ရှိုင်းလှသည့် ကန်ရေပြင်အောက်ကို ကြိုးအရှည်ရှိသလောက် ငုတ်လျှိုးလို့ သွားခဲ့သည်။ ဖေဖေ့ကို နောက်ထပ် ဘာမှ ပြန်မေးနေစရာ မလိုတော့ပါ … သူ့ညွှန်ကြားချက်အတိုင်း တိတ်ဆိတ်စွာ လိုက်လုပ်ရုံသာရှိပါသည် … မကြာခင်မှာ ငါးလာတွတ်သည့် ခံစားချက်မျိုးကို လက်က ခံစားလိုက်မိသည့်အတွက် ငါးမျှားတံကို ဆွဲကိုင် မြောက်လိုက်ချိန်မှာ ကွက်တိပါဘဲ ဖေဖေပြောသလို ကြီးမားလှတဲ့ ငါးကြီးတစ်ကောင်.. ငါးမျှားတံထိပ်မှာ တစ်လူးလူး တစ်လွန့်လွန့်နှင့် ပါလာခဲ့တော့သည်။
ဒီ အဖြစ်အပျက်လေးကို ပြန်သတိရမိတော့ ဖေဖေဟာ ကျွန်မကို ငါးမျှားပုံ မျှားနည်းတင်သာမက ဘ၀မှာ ဘယ်လိုရှင်သန် ရပ်တည်ရမယ်ဆိုတာတွေပါ သင်ကြားပေးခဲ့တာကို ကောင်းစွာ သဘောပေါက်လာ မိပါသည်။
ဒီနေရာမှာ ငါးမျှားချိတ်ကို မချနဲ့…. "
" ဒီနေရာရဲ့ ကန်ရေပြင်အောက်ခြေဟာ မှော်ပင်တွေ အရမ်းထူထပ်တယ်… သမီးရဲ့ ငါးမျှားချိတ်ရော ငါးစာပါ ဆုံးရှုံးရလိမ့်မယ်" လို့ ညွှန်ကြားခဲ့သလို ဘ၀အတွက်လည်း "သမီး ဒီလမ်းကိုတော့ မရွေးချယ်ပါနဲ့ ဒီလမ်းဟာ သမီးအတွက် အန္တရာယ်များလွန်းတယ် " စသဖြင့် ဆုံးမ သွန်သင်ခဲ့ပါသည်။ ကျွန်မဘ၀အတွက် အန္တရာယ်တွေကို ဖေဖေက ကြိုတင်တွေးတော၊ ကြိုတင် သိနားလည်လို့ နေခဲ့သည်။ ကျွန်မအတွက် ဘယ်လို အမျိုးသားဟာဖြင့် ဘ၀ကြင်ဖော်ကောင်းတစ်ယောက် ဖြစ်လာနိုင်တယ်ဆိုတာပါ စိတ်ရှည်လက်ရှည်နဲ့ ဖေဖေက သင်ပြညွှန်ကြားခဲ့ပါရဲ့။
ကျွန်မရဲ့ ဘဝသည် ဖေဖေ၏ ဦးဆောင်မှု၊ လမ်းညွှန်မှု အောက်တွင် အသားကျနေထိုင်ရင်း အဆင်ပြေ ပျော်ရွှင်သော အိမ်ထောင်သည်ဘ၀နဲ့အတူ တန်ဖိုးရှိသော အိမ်ထောင်ရှင်မကောင်း တစ်ယောက်ရဲ့ ဘဝနှင့် အောင်မြင်သော အိမ်ထောင်တစ်ခုကို တည်ဆောက်နိုင်ခဲ့ပြီးပါပြီ။ သားလေး၂ယောက်ရပြီးသည့် နောက် ယခုဆိုလျှင် သူတို့တွေ သည်လည်း ကိုယ့်အိုးကိုယ့်အိမ်နဲ့ အခြေတကျ ဖြစ်ကုန်ပြီ ဖြစ်သည်။ နောက်ဆုံးတော့လည်း အိမ်ကလေးမှာ ကျွန်မခင်ပွန်းနဲ့ ကျွန်မနဲ့ ၂ယောက်တည်းသာ ကျန်ခဲ့တော့သည်လေ။ ဖေဖေ၏ အကူအညီ၊ ဖေဖေ့လမ်းညွှန်မှုသာ မရခဲ့လျှင် ကျွန်မ၏ ဘဝသည် ယခုလောက် အဆင်ပြေ လွယ်ကူချောမွေ့လိမ့်မည် မဟုတ်သည်မှာ သေချာလှသည်။
ရော့ကီးတောင်တန်းအနီးက ရေကန်ကြီးရဲ့ ကမ်းနဖူးမှာ တစ်ယောက်တည်း မတ်တပ်ရပ်နေမိရင်း လက်ရှိ ခုချိန်မှာတော့ ကျွန်မဟာ ပီဘိ ကလေးမလေး ပြန်ဖြစ်နေခဲ့ပါပြီ။ ရေထဲချထားသော ငါးမျှားကြိုးလေးကို အသာအယာ ပြန်ဆွဲယူပြန်တော့ ကန်ရေပြင်က လှိုင်းဂယက်လေးတွေ ထသွားလေသည်။ ထိုလှို်င်းဂယက်လေးများ ထနေသော ကန်ရေမျက်နှာပြင်ကိုကြည့်ရင်း ကျွန်မဖေဖေ၏ စကားတစ်ချို့ကို ပြန်ကြားယောင်မိသည်။
"သမီးရေ…. သမီးဟာ ဖေဖေရဲ့ အကောင်းဆုံး ငါးမျှားသမားတစ်ယောက်ပဲ…"
"အိုး ဖေဖေ.. "
"သမီးအတွက် ဖေဖေဂုဏ်ယူပါတယ်.. "
"သမီး ငါးမျှားတတ်သွားလို့လား ဖေဖေ"
"သမီးဟာ ဖေဖေ မျှော်လင့်ထားသလို အကောင်းဆုံး အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ရဲ့ဘ၀နဲ့ အောင်မြင်စွာ လူလား မြောက်သွားလို့ ပေါ့ကွယ်.. "
ဖေဖေက ကျွန်မကို ကြည်ကြည်နူးနူးလေး ပြုံးပြလိုက်ရင်း ပြန်ဖြေခဲ့ပါသည်။ ဖေဖေနှင့်အတူ ကျွန်မလဲ ကြည်ကြည်နူးနူးလေး ပြုံးလိုက်မိပါသည်။
ထိုချိန်လေးတင် အသက်ကြီးကြီး စုံတွဲတစ်တွဲ လမ်းလျှောက်လာရင်း ကျွန်မကို မြင်တော့ နှုတ်ဆက်စကား ဆိုရင်းက "ငါး ရပြီလား" ဟု လှမ်းမေးပါသည်။ "ဘာမှ မရသေးပါဘူး" လို့ ကျွန်မပြန်ဖြေလိုက်ရင်း ပါးပေါ်တွင် မျက်ရည်စီးကြောင်း၂ခုက အလိုလို စီးကျလာပါတော့သည်။ ကျွန်မကို ကြည့်ကာ ဇဝေဇ၀ါ အတွေးတွေနှင့် စိတ်ရှုပ်သွားပုံရသော အမျိုးသားကြီးက " စိတ်မပူပါနဲ့ကွယ်.. မကြာခင်တော့ မိမှာပါ။ ဒီကန်မှာ ငါးမျှားနေကြတဲ့ လူတိုင်းဆီကို ရောက်ခဲ့ပြီး လိုက်မေးကြည့်တာ ဘယ်သူကမှ ငါးမရကြသေးပါဘူး.. " ဟူ၍ ကျွန်မကို ပြန်နှစ်သိမ့်ပြီး အနားကနေ ကသုတ်ကယက် ထွက်ခွာသွားကြ ပါတော့သည်။
ကြည့်ရသည်မှာ တစ်ယောက်တည်း ငါးမျှားနေပြီး အချိန်ကြာသည်ထိ ငါးမရသေး၍ စိတ်မငြိမ်မသက် ဖြစ်နေသည်ဟု ကျွန်မကို ထင်သွားသည့်ပုံ ရသည်လေ။ ကိစ္စမရှိပါ… ကျွန်မနှင့် အတူတူ ဖေဖေရှိနေသည်ကို သူတို့ သိနိုင်မည် မဟုတ်သလို နားလည်နိုင်မည်လဲ မဟုတ်ပါ။ ငါးတစ်ကောင်တစ်လေ ငါးမျှားချိတ်တွင် လာတွတ်လျှင်ပင် ကျွန်မ စိတ်ကူးလေးထဲတွင် ကျွန်မနှင့် အတူတူ ဖေဖေ ရှိနေသည်ဆိုသည့် အတွေး၊ ဖေဖေနှင့် ငါးမျှားခဲ့ရချိန်တုန်းက ရရှိခဲ့သော ပျော်စရာအချိန် လေးတွေအကြောင်းကို သတိတရ ပြန်တမ်းတ နေမိတာလေးတွေ အနှောက်အယှက်တောင် ဖြစ်သွားနိုင်ပါသည်။ ခုချိန်တွင် မည်သည့်ငါးမျှ မရသော်လည်း ဖေဖေ့မေတ္တာတရားကို ပြန်လည် တသ သတိရနေမိသည်က ကျွန်မအတွက် ပိုကောင်းသည်ပဲ မဟုတ်ပါလား။
ကျွန်မဘ၀ကနေ ဖေဖေပျောက်ကွယ်သွားခဲ့တာ ကြာပြီဖြစ်ပေမဲ့လို့ ယခုအချိန်ထိ ဖေဖေပေးခဲ့သော ငါးမျှားနည်းသင်ခန်းစာမှသည် ဘ၀အတွက် လေ့လာသင်ယူစရာ သင်ခန်းစာအားလုံးသည် ကျွန်မအတွက်တော့ အဖိုးမဖြတ်နိုင်အောင် တန်ဖိုးရှိနေတုန်း၊ လေးစားစွာ လိုက်နာနေရတုန်းသာ ဖြစ်လေသည်။ ဒီလိုအချိန်မှာတော့ ဖခင်တစ်ယောက်ရဲ့ ချစ်ခြင်းမေတ္တာကို လေးလေးနက်နက် နက်နက်ရှိုင်းရှိုင်း ခံစားနားလည်မိရင်း နှလုံးသား ကန်ရေပြင်ပေါ်မှာ ထင်ဟပ်နေသော ဖေဖေ့ပုံရိပ်လေးကို ချစ်ခင်နှစ်သက်မိစွာ ပြုံးရင်း ကြည့်နေမိပါတော့သည်။
Chicken Soup for the Fisherman's Soul မှ Kathleen Kovach ၏ Ripples of Reflection ကို ဘာသာပြန် ခံစားရေးဖွဲ့ပါသည်။ ကမ္ဘာပေါ်ရှိ ဖခင်များအားလုံး ကိုယ်စိတ်နှလုံးချမ်းမြေ့ကြပါစေ။
Links to this post 11 comments
Posted by ချော(အစိမ်းရောင်လွင်ပြင်) at Tuesday, June 12, 2012 Tuesday, June 12, 2012 Labels: ၀တ္ထုတိုများ
ကျင်းနှင့် ၃ကိုက် အကွာ သဲပြင်ပေါ်မှာ ဂေါက်သီးလေးကို ပါတာဖြင့် ကျင်းလေးထဲသို့ ချိန်သားကိုက် ရိုက်သွင်းလိုက်သည်။ ဂေါက်သီးလေးက တစ်လိမ့်လိမ့်နှင့် ကျင်းထဲသို့ လှလှပပလေး ကွက်တိ လိမ့်ဆင်းသွားတော့ ရိုက်ဖော်ရိုက်ဖက်တို့ဆီမှ လက်ခုပ်သံများ တစ်ဖြောင်းဖြောင်း ထွက်လို့လာသည်။ လုံးခင်းရဲ့ မြစိမ်းမြေဂေါက်ကွင်းဆိုတာ ရန်ကုန်၊ မန္တလေးတို့လို မြက်ခင်းစိမ်းနဲ့ကျင်းများ မဟုတ်ပါ။ ကိုးကျင်းလုံးက သဲကျင်းတွေသာဖြစ်ပြီး ၁၈ကျင်းပြည့်ဖို့ဆိုတာ ၉ကျင်းကို ၂ကျော့ ရိုက်ရပါသည်။ ဒီနေ့ ပြုလုပ်တဲ့ မြစိမ်းမြေဂေါက်ကလပ်ရဲ့ နှစ်ပတ်လည် ဖလား ပြိုင်ပွဲမှာ ၁၈ကျင်းကို ပါ ၅ကျင်းနှင့် ဘာဒီ ၂ကျင်းဖြင့် သူ ပထမရသွားပြီ မဟုတ်လား။
ဒီလိုဘဲ ဖြစ်ရမည်လေ။ ကျောက်စိမ်းတွင်းဒေသရဲ့ မြစိမ်းမြေ ဂေါက်ကလပ်ဆိုတာ နှယ်နှယ်ရရ မဟုတ်… မြန်မာပြည်ရဲ့ အကျော်ကြားဆုံး ကျောက်စိမ်းသမား လောပန်းကြီးများရဲ့ စုဝေးရာ၊ တွေ့ဆုံကြရာနေရာ တစ်ခုဖြစ်သည်မို့ ဒီလိုလူတွေကြားထဲတွင် ဂေါက်ရိုက်တာ ညံ့ဖျင်းနေလျှင် ရှက်စရာ ကောင်းမည်။ ဒီလိုတော့ ဖြင့် ဦးကျင်ဟုတ် အဖြစ်မခံနိုင်ပေ။ ဒီလက်ခုပ်သံတွေကို လိုချင်လို့၊ ဂေါက်ရိုက် ကောင်းသည် ဆိုတဲ့ နံမည်ကို လိုချင်လို့မှ ဂေါက်ရိုက်တာကို ပိုက်ဆံအကုန်အကျ များစွာခံပြီး ဆရာနှင့် စံနစ်တကျ သင်ယူထားသည်ဘဲလေ။ ဆရာကို ဖားကန့်မြို့ရှိ သူ့အိမ်မှာ လပေါင်းများစွာ လာနေစေပြီး အချိန်များစွာ ပေးကာ အနီးကပ် လေ့ကျင့်သင်ကြားခဲ့ရသလို၊ ဆရာငှားခတင် သိန်းပေါင်းများစွာ အခကြေးငွေ ပေးခဲ့ရပြီး သူ ငှားသည့် ဆရာကလဲ မြန်မာ့လက်ရွေးစင် ဂေါက်သမားဟောင်း တစ်ဦး ဖြစ်သည်။ ကျောက်လောပန်းတွေမှာ ဂေါက်ရိုက်တတ်ဖို့ကလဲ အရည်အချင်းတစ်ရပ်အနေနှင့် လိုအပ်ပါသေးသည်။ ဒါမှလဲ ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေး ၀င်ဆံ့မည်။ ကျောက်သတင်းများ ရမည်။ စီးပွားရေး လောကမှ လူကြီးများ နှင့်လည်း အဆက်အစပ် ရနိုင်မည်။ တွေ့ဆုံခွင့်၊ ရင်းနှီးခွင့် ရမည်။ အသိမိတ်ဆွေ ပေါများလာမည်။ တံခါးပေါက်တွေပွင့်ဖို့ ဂေါက်ရိုက်တာကလဲ အခွင့်အရေးတစ်ခု ဖြစ်သည်ဘဲလေ။
ဦးကျင်ဟုတ် အတွက် ဂေါက်ရိုက်တာကို ဆရာငှားပြီး သင်ရပေမဲ့ သင်စရာမလိုဘဲ အတွေ့အကြုံနှင့်ရင်း၍ တတ်လာသော ပညာရပ်ကတော့ ကျောက်စိမ်းကို အကဲခတ်သည့် ပညာရပ် ဖြစ်လေသည်။ ဒီဖားကန့်ဒေသ မှော်နယ်မြေကို သူရောက်လာတာ ၁၅နှစ်ပြည့်တော့မည်။ ကျောက်အရောင်းအ၀ယ် လုပ်ရင်းကိုင်ရင်းဖြင့် ကျောက်တစ်လုံးရဲ့ အရည်အသွေးကို အပြင်ဘန်းကိုကြည့်ပြီး အကဲခတ်၊ ခန့်မှန်းရသော ပညာကို သင်စရာမလိုဘဲ သူတတ်လေပြီ။ အတွေ့အကြုံနှင့် သဘာတို့ပေါင်းစပ်၍ ကျောက်တစ်လုံးကို ကောင်းကောင်းကြီး ခေါင်းတတ်နေပြီ။ ကျောက်လောကထဲ စတင်ဝင်ရောက်စဉ်ကတော့ အလဲလဲ အကွဲကွဲ ဖြစ်ခဲ့ဖူးပါသည်။ အလိမ်ခံရပေါင်းလဲ ခနခန၊ ဆုံးရှုံးရပေါင်းလဲ အကြိမ်ကြိမ်။ သို့သော်လည်း ကြာလာသည့် အခါတွင်တော့ ပညာစုံသလောက်ဖြစ်လာကာ ခုချိန်မှာတော့ ကျောက်တစ်လုံးကို ကြည့်ပြီး ဦးကျင်ဟုတ် ခန့်မှန်းလျှင် လွဲခဲပြီ။ သူခန့်မှန်း၍ ၀ယ်ယူလိုက်သော ကျောက် အတော်များများသည်လည်း ဖြတ်တောက် လိုက်သည့် အခါ အောင်ကျောက်များဖြစ်ကာ ပြန်ရောင်းသည့် အချိန်တွင် ၀ယ်ယူသည့်ဈေးထက် အဆပေါင်းများစွာ ပိုပိုရပြီး ခုချိန်မှာတော့ လောပန်းကြီး ဦးကျင်ဟုတ်ဆိုလျှင်ဖြင့် မှော်နယ်မြေမှာ မသိသူ မရှိပြီ။ ငွေကြေး ချမ်းသာမှုရော၊ ကျောက်စိမ်းနှင့်ပါတ်သက်ပြီး အတွေ့အကြုံ ရင့်ကျက်မှုကြောင့်ပါ နံမည်ကျော်ကြား လှပါသည်။ ဒီကြော်ကြားမှုတွေ၊ အောင်မြင်မှုတွေ၊ ငွေကြေးတွေကို သူမမက်မောဘူးလားဟု မေးလာလျှင်တော့ မက်မောလှပါသည်ဟု ရိုးရှင်းစွာ ပြန်ဖြေရပါလိမ့်မည်။ လူမှန်လျှင်ဖြင့် အောင်မြင်မှုနှင့် ငွေကြေးကို မမက်မောသူဟူ၍ ရှိပါမည်လား။ မက်မောလွန်းလှ၍လည်း ဒီလိုဖြစ်လာအောင် ကြိုးစား ခဲ့ရသည် ပါဘဲလေ။
ကျင်းထဲသို့ ဂေါက်သီးလေးကို ရိုက်သွင်းပြီးသွား၍ ဂေါက်တံလေးကို ဘေးမှာရပ်နေသော သူ့ဂေါက်အိတ် သယ်ပေးနေသည့် ကယ်ရီကောင်မလေးအား ပေးလိုက်စဉ် ဧည့်ရိပ်သာဖက်မှ သူ့ဆီသို့ အလျှင်စလို လျှောက်လာသော သူ၏လူယုံတပည့် ကျော်စွာကို တွေ့လိုက်ရသဖြင့် သတင်းတစ်ခုခု ပြောစရာ ရှိနေပြီဆိုတာ သူသိလိုက်၍ ကျန်သောရိုက်ဖော် ရိုက်ဖက်များ ကျင်းစိမ်နေတာကို ရပ်ကြည့်ရင်း ကျော်စွာကို စောင့်နေလိုက်သည်။ သူ့နားသို့ ကျော်စွာ ရောက်လာသောအခါ ခပ်တိုးတိုး လှမ်းပြောသည်။
"ဆရာ မှော်စီစာမှော် မြေစာပုံကနေ ရေမဆေးကျောက်တစ်လုံး ထွက်တယ်.. ကျွန်တော် ကြားခဲ့ရတာတော့ ပစ္စည်းက အရည်အသွေး တော်တော်ကောင်းလို့ လူ၂ယောက်က ၅၀ ပေးပြီး ၀ယ်သွားတယ်.. သူတို့က ကြိုက်ဈေးရတာနဲ့ ပြန်ထုတ်မယ်လို့ ပြောကြတယ်.. အဲဒါ သတင်းရလာလို့ ဆရာ့ကို လာပြောတာ.. ဆရာ သွားကြည့်မလား.. ကျောက်ကတော့ မှော်စီစာမှော် မြေစာပုံကနေ ၀ယ်တဲ့သူတွေ ယူသွားလို့ လုံးခင်းရွာထဲ ရောက်သွားပြီ.. ခုမှ ရတာဆိုတော့ ဘယ်သူမှ မမြင်သေးခင် အရင်သွားကြည့်လိုက်ရင် ကောင်းမယ်ထင်လို့ ကျွန်တော် အမြန်လာပြောတာ "
ဦးကျင်ဟုတ် တစ်ချက် စဉ်းစားလိုက်သည်။ သွားကြည့်လိုက်လျှင် ကောင်းမည်ဟု စိတ်ကူးရမိသည်။ ကျောက်က ခုမှ မြေစာပုံက ရသည်ဆိုလျှင် လူများများ မတွေ့နိုင်သေး.. ရေမဆေးကျောက် ဆိုတာကလည်း လူတွေဘာမှ ပြုပြင်ဖန်တီးထားခြင်း မရှိသေးသည့် ခုမှ မြေကြီးထဲက သဘာဝအတိုင်းရသည့် ကျောက်ကို ပြောသည်မဟုတ်လား။ ကျောက်ဝယ်ရတာလဲ ဒီလို လူများများမသိသည့် ကျောက်ကို သူက ပိုပြီး စိတ်ဝင်စားသည်။ ခုလို ချက်ခြင်း ရသည့်ကျောက်က ၀ယ်ရတာ ပို၍ စိတ်ချရသည်။ လူတွေလက်ထဲ အဆင့်ဆင့်ရောက်ပြီးသား ကျောက်တစ်လုံးသည် ပြုပြင်ဖန်တီးမှု အမျိုးမျိုး လုပ်ပြီးသားလဲ ဖြစ်နေတတ်သည်။ သို့သော် ကျောက်လောကမှာ အတွေ့အကြုံ များလှပြီဖြစ်သော ဦးကျင်ဟုတ်ကတော့ သူဝယ်သည့် ကျောက်သည် မှားခဲလှသလို သူ့ကိုလည်း လိမ်ညာ၍ မရဟု ကျောက်လောကမှာ နံမည်ကြီးသည်လေ။ ဒါကလဲ အတွေ့အကြုံက သင်သွားပေးသည် မဟုတ်လား။
ကျော်စွာက သူ့ဆီမှာ အလုပ်လုပ်တာ ၅နှစ်ပြည့်တော့မည်။ ယခင်ကတော့ ကျော်စွာက သာမန် ကျင်းတူးသမားလေး တစ်ယောက်အဖြစ် သူ့ဆီရောက်လာသူ။ နောက်တော့ လုပ်ရည်ကိုင်ရည်လဲရှိ၊ အရည်အချင်းရှိရှိ အလုပ်ကိုလဲ ကြိုးစားသဖြင့် သူ့ကျင်းဦးစီး ကိုယ်စားလှယ် ဖြစ်လာပြီး နောက်မှာတော့ သူ့လူယုံဖြစ်လာတော့သည်။ ခုလဲ ကျော်စွာကို သူယုံသည်။ ရိုးသားဖြောင့်မတ်သူ တစ်ဦးမှန်းလည်း သူက သိသည်။ သူစိတ်ချရသောသူ၊ သူ့အပေါ် သစ္စာရှိသောသူ တစ်ယောက်ဖြစ်သဖြင့် ကျော်စွာက သူ့အပေါ် ဘယ်တော့မှ လိမ်ညာမည့်သူ မဟုတ်ဟု သူယုံကြည်သည်။ သူ့ကိုခေါ်သည်ကပင် အများကခေါ်သလို လောပန်းဟု မခေါ်၊ တရိုတသေ ဆရာဟုသာ ခေါ်သည်။ ကျောက်သတင်းကို ရွာတွေ၊ မှော်တွေမှာ ခုလို လိုက်စုံစမ်းပြီး သူ့ကို ပြန်သတင်း ပို့နေကျ၊ ပြီးတော့မှ သတင်းရသည့် ကျောက်ကို ဦးကျင်ဟုတ်က လိုက်ကြည့်ပြီး ၀ယ်သင့်မ၀ယ်သင့် ဆုံးဖြတ်လေ့ရှိသည်။ ဦးကျင်ဟုတ်တွင် သူ့ကုမ္ပဏီနံမည်နှင့် ကိုယ်ပိုင်လုပ်ကွက် ကျောက်စိမ်းတူးဖော်သည့် ကျင်းလည်း များပြားစွာရှိပါသည်။ သူ့လုပ်ကွက် ကျင်းမှထွက်သော ကျောက်ကောင်းများစွာကို ကျောက်မျက် ရတနာပြပွဲသို့ တင်ပြီး ရောင်းချလေ့ရှိသလို အခြားသူများ၏ ကျင်းမှ ထွက်သော ကျောက်များ၊ စွန့်ပစ်မြေစာပုံများတွင် လိုက်ရှာကြသော သူများထံမှာ ရေမဆေး ကျောက်သတင်းများကို စုံစမ်းပြီးလည်း ကျောက်အရည်အသွေး ကောင်းပါက ၀ယ်ယူကာ ဖြတ်တန်ဖြတ်၊ ပြန်ရောင်းတန်ရောင်း လုပ်လေ့ရှိပါသည်။
"ကဲ ဒါဖြင့်လဲ သွားကြည့်မယ်.. ပြီးတော့မှ ငါဒီကိုပြန်လာမယ်.. မင်းက ဖားကန့်ကိုပြန်လိုက်ပေါ့. ဘာနဲ့လာခဲ့တာလဲ ကားနဲ့လား ဆိုင်ကယ်နဲ့လား"သူမေးလိုက်တော့ ကျော်စွာက "ကျွန်တော် ဖိုးဝီးနဲ့ လာခဲ့တာဆရာ.. အခု ဆရာ့ကားနဲ့သွားမလား ကျွန်တော်ယူလာတဲ့ ဖိုးဝီးကားနဲ့ပဲ သွားမလားဆရာ"
"အင်း ဖိုးဝီးနဲ့ သွားကြတာပေါ့.. ငါ့ကားကို ဒီမှာထားခဲ့မယ်.. ပြီးတော့ ငါက ဒီပြန်လာရဦးမှာဘဲဟာ "
ထို့နောက် ဂေါက်ရိုက်ဖော်များကို ညနေ ဆုချီးမြှင့်ပွဲအမှီ ပြန်လာခဲ့မည်ဖြစ်ကြောင်း အသိပေးကာ သူနဲ့ကျော်စွာတို့ လုံးခင်းရွာထဲသို့ ကားနှင့် ထွက်လာကြသည်။ ရွာနှင့် ဂေါက်ကွင်းမှာ မဝေးလှပါ။ ကျောက်ရှိနေသည် ဆိုသော အိမ်နှင့်လည်း ကားနှင့်သွားတော့ ၁၅မိနစ်လောက်တွင် ရောက်သွား ပါသည်။ ကားပေါ်မှ ဆင်းပြီး ကျော်စွာဦးဆောင်ရာ နောက်ကို သူလိုက်ခဲ့ရာ အိမ်တစ်အိမ်၏ အနောက်ဖက်တွင် အလေးချိန် ၅ ပိဿခန့် ရှိမည့်ကျောက်တစ်လုံးကို လူငယ်၃ဦး ၀ိုင်းကြည့်နေသည်ကို တွေ့လိုက်ရသည်။ ထိုလူငယ်၃ဦး အရွယ်က ကျော်စွာတို့ အရွယ်တွေ။ သူတို့က ဦးကျင်ဟုတ်ကို တွေ့လိုက်သည်နှင့် မတ်တပ်ရပ်လိုက်ကြပြီး သူလွတ်လပ်စွာ ကျောက်ကိုကြည့်နိုင်ရန် ဘေးကို ဖယ်ပေးလိုက်ကြသည်။ ဦးကျင်ဟုတ်ဆိုတာ ဒီနယ်မြေမှာ မသိသူ မရှိမဟုတ်လား။
ကျောက်စိမ်းတုံးမှာ ရေပင်ကောင်းမွန်စွာ ဆေးကြောရသေးဟန်မတူ။ ရွံ့များက ကျောက်တုံးအချို့နေရာတွင် ကပ်လျှက်သား ရှိနေသေးသည်။ ပါလာသည့် ကျောက်ကြည့်ဓာတ်မီးကိုထုတ်ကာ အစိမ်းရည်ပြချက် (မန်းအုံ) များကို သူ စေ့စေ့စပ်စပ် ကြည့်တော့သည်။ ကျော်စွာက ရေခွက်ကို ကိုင်ကာ သူညွှန်ပြသည့်နေရာတွင် ရေဆေးပေးသည်။ ရွံ့ပေနေသော နေရာ အချို့ကို သံဘရပ်လေးနှင့် အသာအယာပွတ်တိုက်ကာ ကျောက်သားနှင့် အခွံအခြေအနေကို သူကြည့်သည်။ ကျောက်က အမျိုးလည်းကောင်းသည်။ အသားလည်း မဆိုး။ အရည်ပြချက်လေးများကလည်း တော်တော်ကို ကောင်းသည်။ အတွင်းထဲတွင် စိမ်းနေသော အရည်များကို ကျောက်ကြည့်ဓာတ်မီးရောင်နှင့် ထင်ထင်ရှားရှား တွေ့ရသည်။ အခွံပေါ်တွင် အနာဖြစ်နေသော အက်ကြောင်းများကို မြင်နေရသော်လည်း အတွင်းထဲထိ ရောက်မည့်ပုံ မပေါ်။ ကျောက်တစ်လုံးလုံးကို လှန်လှော၍ သူအသေးစိတ် စေ့စေ့စပ်စပ် လေ့လာသည်။ စစ်ဆေးသည်။ ကျောက်တွင် မသင်္ကာစရာ အနေအထားမျိုး မတွေ့ရဟု သူယုံကြည်သည်။ ပြီးတော့လည်း ခုမှ မြေကြီးထဲက ရလာသည့် ကျောက်တစ်လုံးသည် ပြုပြင်ထားဖို့ အချိန်လဲ ရဦးမည်မဟုတ်။ ဒီကျောက်ကို မြန်မာ့ ကျောက်မျက်ရတနာပြပွဲသို့ တင်နိုင်လျှင် နိုင်ငံခြားသားများ အကြိုက်တွေ့မည့် အမျိုးအစားဖြစ်သည်။ ရောင်းရငွေကို ဒေါ်လာနှင့်ရမည်ဖြစ်၍ ဦးကျင်ဟုတ် အတော်ကို စိတ်ဝင်စားမိသည်။ ဒီကျောက်က သေချာပေါက် အမြတ်ရနိုင်မည့်ကျောက်ဖြစ်သည်။
"ကဲ ကျောက်ပိုင်ရှင်ဘယ်သူလဲ.. ဘယ်ဈေးနဲ့ရောင်းမလဲ ပြော"
လူငယ်၂ဦးက ပိုင်ရှင်ဖြစ်ဟန်တူသည်။ ပြီးတော့ ဒီကျောက်လောကထဲ ရောက်တာ ကြာသေးပုံမရ။ သူတို့ကို ဦးကျင်ဟုတ် တစ်ခါမှတော့ မတွေ့ဖူး။ ရောင်းမည့်ဈေးကို ကြိုတင် တိုင်ပင်ပြီးဟန်တူသည်။ တုံ့ဆိုင်းခြင်းမရှိဘဲ တစ်ယောက်ထံမှ အသံထွက်လာသည်။
"ကျွန်တော်တို့က ၂၀၀ ရရင် ရောင်းမှာပါ လောပန်း "
သူတို့ပြောသည့် ၂၀၀ ဆိုသည်မှာ သိန်း၂၀၀ ကိုပြောခြင်းဖြစ်သည်။ ဈေးစကား အသုံးအနှုန်းဆိုတာက အရောင်းအ၀ယ်လုပ်ရာတွင် အချင်းချင်း နားလည်ပြီးသား။ သိန်းဆိုတာ ထည့်မပြောလဲ ဘယ်လောက်ကို ရည်ရွယ်တာဆိုတာ လူတိုင်း နားလည်ကြသည်။ ဒီမှာက အရောင်းအ၀ယ်စကားတွင် သိန်း ဂဏန်းကို အသုံးပြုကြသည်။ ဥပမာ ၅၀ ဆိုတာ သိန်း၅၀၊ ၂၀၀ ဆိုတာ သိန်း ၂၀၀ ကိုပြောခြင်းဖြစ်သည်။ ကျောက်ကို သူတစ်ချက် ပြန်ကြည့်လိုက်သည်။ ကျောက်က သူတို့ပြောသော ဈေးဖြစ်သည့် ၂၀၀ ဆိုတာ မဆိုးလှပါ။ ဖြတ်သင့်သည့်နေရာကို ဖြတ်လိုက်လို့ သူ ထင်ထားသလို ဖြစ်လာ၍ ပြပွဲတင်နိုင်လျှင် ဒေါ်လာသန်းနှင့်ချီ၍ တန်သွားနိုင်သည်။ သို့သော် ဈေးကတော့ အနည်းဆုံးရအောင်တော့ ဆစ်ရပေလိမ့်မည်။ သို့နှင့် သူက ၁၀၀ နှင့်ဈေးဆစ်လိုက်သည်။ ဟိုဘက်က တင်းခံသည်။ သူကလည်း ၁၀၀ တစ်ပြားမှ တိုးမပေးဟု တင်းသည်။ ဒီလိုနှင့် ဈေးစကား အခြေအတင် ပြောကြရင်း နောက်ဆုံးတော့ ၁၅၀ နှင့် ဈေးတည့်သွားသည်။ ရောင်းသူနှင့် ၀ယ်သူ တိုက်ရိုက် အရောင်းအ၀ယ် ပြုကြသဖြင့် ပွဲစားမပါသည့်အတွက် ပွဲခကုန်စရာမလိုတော့ပေ။ ပွဲခ ကုန်တာ မကုန်တာထက် ကျောက်သတင်းအား အပြင်ကို ပြန့်မှာကို သူက ပိုစိုးပါသည်။
"ကဲ ကောင်းပြီး ဒီကျောက်ကို တိပ်စီးထားလိုက်တော့ .. ကျော်စွာက ဖားကန့်အိမ်ကိုပြန်ပြီး ငွေသွားယူ။ ငါဖုန်းဆက်ထားလိုက်မယ်.. ပိုက်ဆံချေပြီးရင် ကျောက်ကို မင်းဘဲ အိမ်သယ်သွားလိုက် သွားကြမယ်.. ငါ့ကို ဂေါက်ကွင်းပြန်လိုက်ပို့တော့ .. "
တိပ်စီးသည်ဆိုသည်မှာ ရောင်းသူဝယ်သူ ဈေးတည့်၍ အတည်ပြုပြီးသောအခါ ငွေမချေခင် စပ်ကြား အဖြူရောင် ကျောက်စီးသည့်တိပ်နှင့်စည်းကာ ရောင်းသူက သိမ်းထားလိုက်သည်။ တိပ်စည်းထားပြီးလျှင် အခြား ၀ယ်လက်များကို ပြ၍ မရတော့ပေ။ ထို့နောက် ၀ယ်ယူသူဘက်မှ ငွေလာချေသောအခါတွင်မှ ကျောက်ကို ၀ယ်သူလက်ထဲ ထည့်လိုက်ခြင်းဖြစ်သည်။ ကျောက်ဝယ်ရောင်းလုပ်ကြသည်မှာ မည်သူမျှ ငွေထုပ်ကြီးပိုက်ကာ ၀ယ်ကြ ရောင်းကြသည်မဟုတ်ပါ။ ပစ္စည်းကြည့်ပြီး ဈေးတည့်ပြီးပြီဆိုမှသာ နောက်မှသာ သင့်ရာနည်းနှင့် ငွေချေကြခြင်းဖြစ်သည်။ အချို့ကလည်း ဈေးတည့်လျှင် စရံငွေ ပေးထားရသည်။ ၀ယ်သူဘက်မှ အရောင်းအ၀ယ် ပျက်ခဲ့လျှင် စရံငွေရှုံးပြီ ဖြစ်သည်။ ဦးကျင်ဟုတ်ကတော့ နံမည်တစ်လုံးနှင့် နေသူမို့ သူ့ကို မယုံကြည်သူလဲ မရှိသောကြောင့် စရံငွေ ပေးလေ့မရှိပါ။ သူတို့၂ယောက် ကားပေါ်တက်ပြီး ကားမောင်းထွက်လာတော့ သူက ကျော်စွာကို လှမ်းပြောလိုက်သည်။
"ကျော်စွာ ကျောက်က မဆိုးဘူး အတော်ကောင်းတယ်.. ဒီဈေးနဲ့ ရတာ တော်တော် တန်သွားပြီ. ငါဒီကျောက်ကို ဖြတ်ပြီးရင် ကျောက်မျက်ပြပွဲကို တင်မယ်.. "
"ဟုတ်ကဲ့ ကောင်းပါတယ်. ဆရာ" ကျော်စွာက သူ့စကားကို ထောက်ခံလိုက်သည်။
"အင်း ငါဂေါက်ကွင်းကနေ ညနက်မှ ပြန်ရောက်တော့မယ်. ဆုပေးပွဲပြီးရင် အစားအသောက်တွေက ပါဦးမှာဆိုတော့ ညတော်တော်နက်မဲ့ပုံ ရတယ်.. မင်း ဖားကန့်အိမ်ကနေ ငွေယူလာပြီး ကျောက်လာတင်တဲ့ အခါ ငါ့ဆီ ၀င်မလာနဲ့တော့.. အိမ်ကိုသာ ပြန်သွားတော့ ဟုတ်ပြီလား.. သတင်းမပေါက်ကြားခင် ကျောက်ကို မနက်ဖန် ဖြတ်မယ်.. အချိန်က သိပ်မရှိတော့ဘူး ပြပွဲလဲနီးနေပြီး.. ပြပွဲတင်ဖို့ဆို ရန်ကုန်ပို့ဖို့ လုပ်ရဦးမယ်.. ဒီကျောက်က အခြေအနေကောင်းမယ်လို့ ငါတော့ ထင်တယ်.. အင်း.. မင်းသတင်းလာပေးတဲ့အတွက် မင်းကိုလဲ ဘောက်ဆူး ကောင်းကောင်းပေးရမှာပေါ့ကွာ.. "
ကျော်စွာက ပြုံးလိုက်ရင်း "ရပါတယ်ဆရာ" ဟု သာပြန်ပြောသည်။
သူ ဂေါက်ကွင်းမှာ ဆင်းနေခဲ့ပြီး ကျော်စွာကတော့ လုံးခင်းနှင့် ၆မိုင်ဝေးသော ဖားကန့်အိမ်သို့ ပြန်ကာ ငွေပြန်ယူလေပြီ။ အိမ်က သူ့မိန်းမထံ ကျော်စွာ ရောက်လာလျှင် ပိုက်ဆံ သိန်း၁၅၀ ထုတ်ပေးလိုက်ဖို့ သူဖုန်းကြိုဆက်ထားလိုက်သည်။ ဂေါက်ကလပ်ထဲ သူပြန်ရောက်တော့ ဂေါက်ရိုက်သူအားလုံး သူ့အဖွဲ့လိုက် ၁၈ကျင်းပြည့် ရိုက်ပြီးနေပြီ။ ဆုချီးမြင့်ရန်ပင် အဆင်သင့် ဖြစ်နေပေပြီ။ ဒီနေ့ပွဲစဉ် ကုန်ကျစရိတ်အတွက် Sponsor က ရွှေမြစိမ်း ကုမ္ပဏီပိုင်ရှင် ဦးလောဟန်ဖြစ်သည်။ ပထမရသော သူ့အတွက် အမှတ်တရ ဖလားတစ်လုံးနှင့် လက်ဆောင်ပစ္စည်းများကို ဂေါက်ကလပ်၏ နာယကဖြစ်သူ မြို့နယ် မယက ဥက္ကဌမှ ချီးမြှင့်သည်။ ကျန်သည့် ဒုတိယ၊ တတိယဆု၊ အဝေးဆုံးရိုက်ချက်ဆု၊ စသည့် ဆုအသီးသီးကို ချီးမြှင့်ပေးပြီး အစားအသောက်ပွဲကြီးကို ကျင်းပတော့သည်။ နံမည်ကြီး လောပန်းကြီးက Sponsor လုပ်သော ပွဲဖြစ်၍ စားစရာ သောက်စရာတွေက အလျှံပယ်ဖြစ်သည်။ ထိုညက တော်တော်ညနက်မှ သူအိမ်ပြန်ရောက်သည်။ အိမ်ရောက်တော့ သူ့မိန်းမပင် အိပ်ပျော်နေပြီ။ အ၀တ်အစားလဲကာ သူ့အိပ်ရာပေါ် ၀င်အိပ်လိုက်တော့ သောက်ထားသည့်အရှိန်ကြောင့် ခေါင်းချလိုက်တာနှင့် နှစ်နှစ်ခြိုက်ခြိုက် သူ အိပ်ပျော်သွားတော့သည်။
နောက်တစ်နေ့ မနက် ၁၀နာရီလောက်မှ သူအိပ်ရာက နိုးတော့သည်။ အိပ်ရာက နိုးနိုးချင်း လုပ်စရာ အလုပ်ကို စဉ်းစားတော့ မနေ့ညနေက ၀ယ်ထားသော ကျောက်ကို သူသတိရလိုက်သည်။ သူ့မိန်းမကို "မနေ့ညက ကျော်စွာ ကျောက်လာထားသွားတယ် မဟုတ်လား " ဟု မေးလိုက်တော့ မိန်းမက "ဟုတ်တယ် ကျောက်တွေသိမ်းတဲ့ ဂိုဒေါင်ထဲမှာ သိမ်းထားလိုက်တယ်.. " ဟု ပြန်ဖြေသည်။ သူမျက်နှာသစ် မနက်စာ စားသောက်ပြီး သူ့ခြံထဲက ကျောက်ဖြတ်ခုံရှိသည့် ဂိုဒေါင်ဘက်သို့ သူထွက်လာခဲ့သည်။ ဖြတ်ခုံတွင် အလုပ်သမား ၃ ယောက်က ယခင်နေ့တွေက သူဖြတ်ရန် ပေးထားသော ကျောက်အချို့ကို ဖြတ်နေကြသည်။ သူ့ကိုယ်စားလှယ် တစ်ချို့က ဘေးမှာ ကြီးကြပ်နေသည်။ ကိုယ်စားလှယ် ဆိုတာက ကျင်းကိစ္စ ကျောက်ကိစ္စများကို ဦးစီးကြီးကြပ်ဖို့ ခန့်အပ်ထားသူများဖြစ်သည်။ သူက ကိုယ်စားလှယ်တစ်ယောက်ကို သူ့မိန်းမထံမှ မနေ့က ၀ယ်လာသည့်ကျောက်ကို သွားထုတ်ခိုင်းလိုက်သည်။
ကိုယ်စားလှယ်ကောင်လေး ရောက်လာတော့ ကျောက်ကိုသေချာ ပြန်စစ်ကာ ဖြတ်ရမည့်နေရာကို မှင်ခြစ်ရာလေးနှင့် သူက မှတ်သားပေးလိုက်သည်။ ကျောက်ဖြတ်ရမည်ဟု သူသတ်မှတ်သော နေရာက အတွင်းထဲတွင် အစိမ်းရည် များများ ရှိနိုင်မည့်နေရာ။ အပေါ်ပိုင်း အသား ခပ်ပါးပါးလေးကိုသာ သူက ဖြတ်ခိုင်းလိုက်သည်။ ကျောက်ဖြတ်နေသည့် ကောင်လေးက ဖြတ်လက်စ ကျောက်ပြီးသွားတော့ သူပေးလိုက်သည့် ကျောက်ကို အမှတ်အသား ပေးထားသည့် နေရာတွင် စတင်ဖြတ်သည်။ ထိုအချိန်တွင် သူ့အသိ လောပန်းဖြစ်သူ ဦးမောင်ဟန်နှင့် ဦးဝင်းအောင် တို့၂ယောက် ရောက်လာကြောင်း သူ့မိန်းမက လာပြောတော့ သူက "ဒီကို လွတ်လိုက်" ဟု ပြောလိုက်သည်။ သူတို့က ရန်ကုန်ကျောက်မျက် ရတနာပြပွဲမှာ ကျောက်တင်ရောင်းရန်ကိစ္စ တိုင်ပင်ဖို့ ရောက်လာကြခြင်းသာ။ ကြုံတုန်း သူတို့၂ဦးကို သူဖြတ်သည့် ကျောက် အနေအထားကို ကြွားဖို့ အတော်ဘဲ ဖြစ်သွားသည်။ သူက ဒီကျောက်သည် အောင်ကို အောင်ရမည်ဟု စိတ်ထဲက ယုံကြည်မိလေသည်။
ကျောက်သားအနေအထားက ပြောစရာမရှိ၊ အထဲတွင်လည်း အစိမ်းရည်များများ စားစား ရှိနေမည်ဟု မျှော်လင့်ထားသည်။ သူတို့ကလည်း ကျောက်ဖြတ်တာကို ကြည့်ဦးမည် ပြီးတော့မှ အလုပ်ကိစ္စ စကားပြောမည်ဟု ဆိုကာ စောင့်ကြည့်နေသည်။ ဦးကျင်ဟုတ် ကိုယ်တိုင်လည်း ဘေးနားကနေ အခြေအနေကို စောင့်ကြည့် နေမိသည်။ ကျောက်ကို စက်နှင့် ဖြတ်နေ၍ ကျောက်သားနှင့် စိန်သွား ပွတ်တိုက်နေသည့် တစ်ကျွီကျွီသံက နားငြီးစရာ ပေါ်ထွက်နေသည်။ သို့သော် ကျောက်သမားများ အတွက်တော့ ထိုအသံသည် မျှော်လင့်ချက်တို့ရဲ့ စိန်ခေါ်သံသာ ဖြစ်လေသောကြောင့် နားငြီးသည်ဟု သူကတော့ မထင်ပေ။ ကျောက်က ဖြတ်နေရင်း သုံးပုံ တစ်ပုံလောက် နီးပါးလောက်တွင် မင်္သကာစရာ အနံ့တစ်ခုကို ရလိုက်သည်။
အနံ့….. ဒီအနံ့ သူသိသည်။ သွားတိုက်ဆေးအနံ့ပဲ ဖြစ်သည်။
သူတစ်ကိုယ်လုံး မတ်ခနဲဖြစ်သွားသည်။ မျက်နှာတစ်ပြင်လုံးလဲ နီရဲလာသည်။ စောင့်ကြည့်နေသည့် သူ့မိတ်ဆွေ ၂ယောက်နှင့်၊ ကိုယ်စားလှယ်အချို့ ဒေါသထွက်လာပုံရသည့် သူ့ကို အထိတ်တလန့် လှမ်းကြည့်သည်။ မိတ်ဆွေ လောပန်း၂ယောက်ကလည်း အခြေအနေကို နားလည်သွားသည်။ ကျောက်ကို သူကြည့်ဖို့ မလိုတော့။ သူသိပြီ။ သူအလိမ်ခံလိုက်ရပေပြီ။ ပြုပြင်ပြီး ပိပိရိရိဖြင့် အတု လုပ်ထားသော ကျောက်ကို ကျော်စွာက ရေမဆေးကျောက်ဟု သတင်းလာပေးသည်။ သူကလဲ ကျော်စွာကို ယုံကြည် လွန်းစွာနှင့် သူပြောသည့်နေရာကို လိုက်သွားပြီး သွားကြည့်ခဲ့သည်။ စစ်တော့စစ်ဆေးတာပါဘဲ။ သို့သော် ကျော်စွာကို ယုံကြည်စိတ်ရယ်၊ သူ့ဘက်က ပေါ့လျှော့တာရယ်၊ အတုက အင်မတန် အကွက်စေ့ ပိရိကာ ဘယ်လိုမှ မရိပ်မိနိုင်တာရယ်ကြောင့် သူခံလိုက်ရလေပြီ။
"သွားစမ်း ကျော်စွာကို အခုချက်ခြင်း သွားခေါ်ခဲ့.. " သူ ဒေါသတကြီး အော်ပြောလိုက်သည်။
တစ်ယောက်က ကမန်းကတန်း ထွက်သွားသည်။ ထိုအချိန်တွင် သူသတ်မှတ်ထားသော ဖြတ်ရာအတိုင်း ကျောက်က ဖြတ်ပြီး၍ နှစ်ခြမ်းဖြစ်သွားသည်။ ကောင်လေးတစ်ယောက် ကောက်ယူကာ သူ့ရှေ့ လာချပေးသည်။ ထင်သည့်အတိုင်းပါပဲ… ကျောက်ထဲတွင် သွားတိုက်ဆေးနှင့် ဖယောင်းသားများကို တွေ့လိုက်ရသည်။ ကျောက်ထိပ်ပိုင်း တစ်နေရာကို အသာဖြတ်ကာ ဂန်းနှင့် ဖောက်ထုတ်ပြီး ကျောက် အတွင်းသားများကို ဖယ်ထုတ်ထားခြင်းပင်။ ပြီးနောက် အရောင်လှသော အစိမ်းရောင် သွားတိုက်ဆေးနှင့် ဖယောင်းသားတို့ကို ကျောက်ကြည့်မီးနှင့် ထိုးကြည့်မည့်နေရာများတွင် အဓိက ထား၍ သိပ်ထည့်ထားသည်။ ဖြတ်ထားသည့် နေရာကို ပိပိရိရိ ပညာပါပါ ကျောက်ကပ်ကော်နှင့် ပြန်ဆက်ကာ ပြန်ဖုံးထားသည်။ ထို့နောက် ဖြတ်ဆက်ထားသည့်အရာကို ဖုံးလွှမ်းမိစေရန် အပေါ်ကမှ ကျောက်အခွံ၏ အရောင်အတိုင်း တစ်ထပ်တည်းဖြစ်အောင် ကျောက်ပြုပြင်သူ ပညာရှင် တစ်ယောက်ယောက်က ကျွမ်းကျင်စွာ မီးဖုတ်ကာ ကျောက်အခွံအတုအဖြစ် ပြုပြင်ထားခြင်းသာ ဖြစ်လေသည်။ ရုတ်ရက်တော့ ဖြတ်ဆက်ထားသည့် နေရာကို မမြင်ရတော့ပေ။ အထဲက စိမ်းမြနေသော သွားတိုက်ဆေး အရောင်ကြောင့်လည်း ကျောက်ကို အပြင်ကနေ ဓာတ်မီးနှင့် ထိုးကြည့်သည့်အခါ အတွင်းထဲက ကျောက်သားအရောင်က စိမ်းစို လှပနေခြင်းသာ။
ဦးကျင်ဟုတ်လို ကျောက်လောကမှာ ဆရာတစ်ဆူအဖြစ် ကျွမ်းကျင်လှပါသည်ဆိုသည့် သူပင် ခံသွားရလောက်အောင် ပိပိရိရိ သေသေသပ်သပ် လှည့်စားသွားနိုင်သည့် ရိုက်ချက်ပြင်းလှသော ရေမဆေးကျောက်။ သူ့အတွက် သိန်း ၁၅၀ ဆုံးရှုံးတာ ဘာမှ ပြောပလောက်သည် မဟုတ်သော်လည်း ဂုဏ်သိက္ခာဆုံးရှုံးမှုက ပိုတန်ဖိုးကြီးသည်။ ဒီသတင်းက အပြင်ကို ထွက်သွားလျှင် ဦးကျင်ဟုတ် အလိမ်ခံလိုက်ရသည်ဆိုသည့် သတင်းက ကျောက်သမားမား အချင်းချင်း၊ လောပန်းအချင်းချင်းကြားတွင် သူမျက်နှာပျက်ရတော့မည်။ လူတွေရဲ့ ပါးစပ်ပေါက်ဆိုသည်ကား ထိန်းဖို့ ခက်လှသည်လေ။ တားလို့ရမည်မဟုတ်။ ကျောက်ကျွမ်းကျင်လှပါသည်ဟု နံမည်တစ်လုံးနှင့် နေနေသော သူ့အတွက်က ခံရခက်လှစေတော့သည်။ စဉ်းစားတိုင်း ဒေါသဒီရေက တစ်ရှိန်ရှိန်နှင့် တက်လာလေတော့သည်။
မကြာခင်မှာ ကျော်စွာကို သွားခေါ်သော သူ့ကိုယ်စားလှယ် ကောင်လေး ပြန်ရောက်လာသည်။
"လောပန်း.. ကိုကျော်စွာက မနေ့ညကတည်းက ပြန်အိပ်ပုံမရဘူး။ သူ့အခန်းထဲမှာ မရှိဘူး။ပြီးတော့ သူ့ပစ္စည်းတွေလဲ မရှိတော့ဘူး… သူ ဒီက အပြီးထွက်သွားပြီထင်တယ် လောပန်း " ဟု သူ့ကို ပြောသည်။
"တောက် … "
ခံပြင်းလွန်းသော ဒေါသစိတ်နှင့် တောက်တစ်ချက် ပြင်းထန်းစွာ ခေါက်လိုက်မိသည်။ သူ့မိတ်ဆွေ ၂ယောက်ရှေ့တွင် ကောင်းကောင်းကြီး အရှက်ကွဲလေပြီ။ ဦးမောင်ဟန်က "ကိုကျင်ဟုတ်.. ခင်ဗျား ဘာဆက်မလုပ်မလဲ.. ဒီကိစ္စ ရဲစခန်းမှာ သွားပြီး အမှုဖွင့်မလား.. ဒါဆို ရောင်းတဲ့သူကိုရော ခင်ဗျားလူ ကျော်စွာကိုပါ ဖမ်းလို့ရတယ်.. " ဟု ၀င်ပြောသည်။
မဖြစ်ပါ။ ဒီလိုတော့ သူအဖြစ်မခံနိုင်ပြန်။ ရဲစခန်းသွားတိုင်လိုက်လျှင် သူအလိမ်ခံရသည့် သတင်းက ပိုပြီး ပျံ့နှံ့မှာ သေချာသည်။ ခုထက်ပိုဆိုးမည့် အခြေအနေကို သူဖန်တီးခွင့်မပြုနိုင်။
"မတိုင်ဘူး.. ဒီကောင့်ကို မြေလှန်ရှာမယ်.. ကျုပ်ကိုယ်တိုင် သူ့ကို မှတ်လောက်အောင် ပညာပေးရမယ်.. ဒီဒေသမှာ ဒီကောင့်အတွက် နေစရာ လုပ်စားစရာ မြေမရှိစေရဘူး… ငါ့ဆီမှာ အလုပ်လုပ်ပြီး ငါ့ကို သစ္စာဖောက်တဲ့အကောင်.. ငါလိုလူကိုများ ဒင်းက မခန့်လေးစားနဲ့.. တွေ့ကြသေးတာပေါ့ကွာ… "
ထိုစဉ် ကောင်လေးတစ်ယောက်က သူ့ကို စာတစ်စောင်လာပေးသည်။ လူတစ်ယောက်က ဦးကျင်ဟုတ်အတွက် ပေးသွားသည်ဟု ဆိုသည်။
"ပေးစမ်း အဲဒီစာ " သူ ဆတ်ခနဲလှမ်းယူကာ သိချင်စိတ်ဖြင့် အလျှင်အမြန်ဖွင့်ကြည့်လိုက်တော့
လွန်ခဲ့တဲ့ ၁၅နှစ်က အကြွေးလေးတစ်ခုကို ဆပ်လိုက်တယ်လို့ သဘောထားလိုက်ပါ။ ခင်ဗျား ဦးကျော်အောင် ကို မှတ်မိဦးမှာပါနော်။ ဦးကျော်အောင် ဆိုတာ တစ်ခြားသူမဟုတ်ပါဘူး။ ကျွန်တော့်အဖေအရင်းခေါက်ခေါက်ပါ။ အဖေနဲ့ ခင်ဗျားနဲ့ ကျောက်တစ်လုံးကို အတူတူရခဲ့ကြတယ်.. ဒီကျောက်က အောင်မဲ့ကျောက်ဆိုတာ ခင်ဗျားရော အဖေရော သိတယ်.. ပြီးတော့ ဒီကျောက်ကို ဒီမှာဘဲ ရောင်းရင် ဈေးကောင်းမရမှာစိုးလို့ တရုတ်နယ်စပ်မှာ သွားရောင်းဖို့ ခင်ဗျားက အဖေ့ကိုပြောတယ်.. အဲဒီချိန်မှာ အဖေက ငှက်ဖျားကြောင့် နေသိပ်မကောင်းဖြစ်နေတော့ ဖားကန့်မှာဘဲ ဆေးရုံတက်ပြီး နေခဲ့ဖို့ ခင်ဗျားက အဖေကိုအကြံပေးတယ်.. ကျောက်ကို ခင်ဗျားဘဲ တရုတ်ပြည်ထဲကို နယ်စပ်ကနေ သွားရောင်းမဲ့အကြောင်း ပြောတယ်.. အဖေကလဲ သူခင်မင်လွန်းတဲ့ ခင်ဗျားကို ယုံကြည်စိတ်ချစွာနဲ့ဘဲ ကျောက်ကို ခင်ဗျားလက်ထဲ ထည့်လိုက်တယ်.. ဒါပေမဲ့ ၁နှစ်၂နှစ် ကြာတဲ့အထိ ခင်ဗျားက ကျောက်ကို ရောင်းပြီး ဖားကန့်ကိုပြန်မလာခဲ့ဘူး.. အဲဒီကျောက်ကို ခင်ဗျား ရောင်းလိုက်တာ သိန်း တစ်ရာ ရတယ်လို့ တရုတ်ပြည်က ပြန်လာတဲ့ အသိတစ်ယောက်ဆီက အဖေက သတင်းရတယ်.. အဲဒီခေတ်က သိန်းတစ်ရာဆိုတဲ့ ငွေဟာ နည်းနဲ့ ပမာဏမဟုတ်ဘူးဆိုတာ ဒီငွေတွေနဲ လူလူသူသူ ဖြစ်လာတဲ့ ခင်ဗျားက အသိဆုံးဖြစ်မှာပါ။ ငှက်ဖျားဒဏ်ကြောင့်ဘဲ ခင်ဗျားထွက်သွားပြီး ၃နှစ်အကြာမှာ အဖေဆုံးသွားခဲ့တယ်. အဖေဆုံးတယ်ဆိုတာ သိရတော့ ဖားကန့်ကို ပြန်လာပြီး ခင်ဗျားက ကျောက်လုပ်ငန်းဆက်လုပ်ပြီး တကယ့်လောပန်းကြီး လုပ်နေခဲ့တယ်..
ကျွန်တော်တို့သားအမိမှာတော့ ငှက်ဖျားရောဂါဖိစီးပြီး မန္တလေးအိမ်ကို လက်ချည်းသက်သက် ပြန်လာတဲ့ အဖေကို ရှိတာလေးနဲ့ ဆေးကုပေးရင်း လုံးပါးပါးခဲ့ရတယ်.. အဖေပြောပြလို့ ခင်ဗျားအကြောင်းကို ၁၀နှစ်သားထဲက သေသေချာချာသိခဲ့ရတယ်..မှတ်မိနေခဲ့တယ်.. အဖေက ခင်ဗျားကို သိပ်ကို စိတ်နာခဲ့တယ်.. သူဒီလောက် ခင်မင်တဲ့ ယုံကြည်စိတ်ချတဲ့ ခင်ဗျားက ဒီလို လုပ်သွားမယ်လို့ သူလုံးဝမထင်ခဲ့ဘူး.. သေတဲ့အထိ အဖေက ခင်ဗျား အကြောင်းဘဲ တဖွဖွ ပြောသွားခဲ့တယ်.. ဒါကြောင့် ကျွန်တော် အရွယ်ရောက်လာတော့ ခင်ဗျားအကြောင်းကို သေချာအောင် စုံစမ်းပြီး အဖေ့ရဲ့ ကြွေးကို ဆပ်နိုင်ဖို့ ခင်ဗျားဆီမှာ အလုပ်ဝင်ခဲ့ရတာ။ ခုချိန်မှာ သိန်းတစ်ရာ့ငါးဆယ်ဆိုတာ ခင်ဗျားအတွက် ဘာမှ မဖြစ်လောက်ဘူးဆိုတာ ကျွန်တော်သိပါတယ်.. ဒါပေမဲ့ ခင်ဗျားကို လူယုံသတ်လို့ သေရတဲ့ အရသာ ဘယ်လိုခါးသီးတယ်ဆိုတာ ခံစားတတ်စေချင်တယ်.. ကိုယ်ချင်းစာတတ်စေချင်တယ်.. ကျွန်တော့်အဖေက သူငယ်ချင်းအရင်းဖြစ်တဲ့ ခင်ဗျားရဲ့ လိမ်ညာမှုကို ခံသွားရတယ်..
ဒါကြောင့်လဲ ဒီကျောက်ကိစ္စကို အကွက်စေ့အောင် စီစဉ်ပြီး သေချာပြီ ဆိုတော့မှ ရေမဆေးကျောက်လို့ သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ ပေါင်းပြီး ခင်ဗျားကို လိမ်ခဲ့တာ။ သူငယ်ချင်းတွေက ငွေကြေးကြောင့်မဟုတ်ဘဲ ကျွန်တော့်ကို ခင်မင်မှု သက်သက်နဲ့အတူ ခင်ဗျားကို သင်ခန်းစာပေးချင်တဲ့ စိတ်ကြောင့် သူတို့ ကူညီကြတာဘဲ ဖြစ်တယ်.. ခင်ဗျားဆီက ရလိုက်တဲ့ ငွေ သိန်းတစ်ရာ့ငါးဆယ်ကို ကျွန်တော်လဲ မယူသလို ဘယ်တစ်ဦးတစ်ယောက်မှလဲ မယူပါဘူး… ခင်ဗျားရဲ့ အပြစ်ဒဏ်အတွက် ဆေးကြောဖို့ ဖားကန့်မြို့ အထက်တန်းကျောင်းကို သိန်းတစ်ရာနဲ့၊ လုံးခင်း အလယ်တန်းကျောင်းကို သိန်း၅၀ ခင်ဗျားနံမည်ရယ် ကျွန်တော့် အဖေနံမည်ရယ် ပေါင်းပြီး လှူလိုက်ပါပြီ. ဒါဆိုရင် အဖေ့အပေါ်တင်နေတဲ့ ခင်ဗျားအကြွေးလဲ ကျေပြီလို့ ကျွန်တော်ယူဆသလို ခင်ဗျားအတွက်လဲ မနစ်နာဘူးလို့ ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်.. ဒီနေ့ကစပြီး ခင်ဗျားနဲ့ အဖေကြားက အကြွေး ရှင်းပြီဖြစ်သလို ကျွန်တော်လဲ အလုပ်ထွက်ပါပြီ. ကျွန်တော့အမေရှိရာကို ပြန်ပြီး ကောင်းရောင်းကောင်းဝယ် အလုပ်တစ်ခုခုကို လုပ်ပြီး ဘ၀အသစ်ပြန်စပါပြီ။ ယုံကြည်မှုကို ရိုက်ချိုးခံရတာ၊ သစ္စာဖောက်ခံရတာ ဘယ်လောက် ခါးသီးဖို့ကောင်းတယ် ၊ မနှစ်သက်ဖွယ်ကောင်းတယ်ဆိုတာ ခင်ဗျား အခုခံစားလိုက်ရလို့ သိလောက်ပါပြီ။
စာကိုဖတ်ပြီး ဦးကျင်ဟုတ်မျက်နှာ တစ်ဖြေးဖြေး ပြောင်းလဲသွားသည်။ ဒေါသတကြီး ဖြစ်ခဲ့သော အမူအရာများပျောက်ကွယ်သွားပြီ။ ကျော်စွာလုပ်ရပ်ကို သူနားလည်နိုင်လိုက်ပါပြီ။ သူ့အပြစ်နှင့် သူဘဲမဟုတ်လား။ ကျော်စွာ့စာထဲမှာ ရေးထားသည်များကလည်း အမှန်ဘဲဖြစ်သည်။ သူနှင့် ကျော်စွာ့အဖေ ဦးကျော်အောင်တို့က ဒီဖားကန့်ရောက်မှ ခင်ကြသိကြပေမဲ့ အတော့်ကို ရင်းနှီး ခင်မင်သွားကြသည်။ အရောင်းအ၀ယ် အတူတူလုပ်၊ ကျောက်တူးတော့လည်း အတူတူ တူးခဲ့ကြသည်။ ကျောက်တစ်လုံး အတူတူရတော့ တရုတ်ပြည်မှာ သွားရောင်းဖို့ သူက အကြံဖြစ်သည်။ ထိုအချိန်တွင် ကျော်စွာ့အဖေက အပြင်းအထန် နေမကောင်းတာကြောင့် မလိုက်ခဲ့ဖို့ သူက တားခဲ့သည်။ ကျောက်ရောင်းရပြီးတာနှင့် ပြန်လာမည်ဟု ကတိပေးခဲ့သည်။ ဒီလို စီစဉ်တုန်းကတော့ ထိုကျောက်ကို သူလိမ်သွားဖို့ ဆန္ဒမရှိခဲ့တာတော့ အမှန်ပါ။ သို့သော် တရုတ်ပြည်နယ်စပ်တွင် သွားရောင်းချတော့ သူမျှော်လင့် ထားသည်ထက် ငွေက ပိုရသဖြင့် ငွေမြင်လျှင် အလိုရမ္မက် ပိုကြီးလာသော လောဘသားတို့ ထုံးစံအတိုင်း ဒီငွေတွေကို ကျော်စွာတို့အဖေကို သူတစ်ဝက် ခွဲပေးရမှာ ၀န်လေးသွားတော့သည်။ အားလုံးကို အပိုင်လိုချင်စိတ်နှင့် ဖားကန့်သို့ ပြန်မလာတော့ဘဲ ဟိုမှာ နေနေခဲ့သည်။ သူပြန်အလာကို ကျော်စွာ့အဖေက ဖားကန့်မှာ ၂နှစ်လောက်စောင့်နေရင်း ငှက်ဖျားက ပိုပိုဆိုးလာသောကြောင့် မန္တလေးသို့ ပြန်သွားခဲ့ပြီး ဟိုရောက်လို့ သိပ်မကြာခင် ဆုံးသွားသည်လို့ သတင်းရတော့ သူဖားကန့်ပြန်လာပြီး ၂ဦးပိုင် ကျောက်ရောင်းရသည့်ငွေနှင့် လောပန်းကြီးလုပ်ကာ ကျောက်လောကတွင် ပြန်လည်ကျင်လည်ရင်း ပို၍ပို၍ ချမ်းသာလာတော့သည်။
သူစာကို ပြန်ခေါက်လိုက်ရင်း ခုနက ဖြတ်ထားသည့်ကျောက်ကို အိတ်တစ်လုံးထဲထည့်ဖို့ တစ်ယောက်ကို လှမ်းပြောလိုက်သည်။ ထိုအိတ်ထဲတွင်ကျော်စွာရဲ့ စာကိုပါ ထည့်ခိုင်းလိုက်ပြီး အိတ်ကိုပိတ်ကာ လုံခြုံရာ ဂိုဒေါင်ထဲသိမ်းထားဖို့ သူပြောလိုက်တော့သည်။ သူအလိမ်ခံရသည့်သတင်း အပြင်ပေါက်ကြားမှာကိုလည်း သူစိတ်မပူချင်တော့ပါ။ မကောင်းမှုဆိုသည်မှာ အရိပ်တစ်ခုလိုသာ အနောက်ကနေ လိုက်ပါတတ်ကြောင်း သူသိနားလည်လိုက်ပါပြီ။ လောဘစိတ်ကြောင့် သစ္စာမဲ့ခြင်းဆိုသည့် အပြစ်ကို လွန်ကျူးခဲ့သည့်အတွက် သူ့နံမည်၊ သူ့ဂုဏ်သိက္ခာ စွန်းထင်းသွားမည် ကျဆင်းသွားမည် ဆိုလျှင်လည်း ပေးဆပ် ရတော့မည်သာ ဖြစ်သည်။ တကယ်ဆိုလျှင် ကျော်စွာသည် အလွန်စိတ်ထားကောင်းသည်ဟုသာ ဆိုရမည်။ သူ့အပေါ် ဒီထက် ဒုက္ခပေးချင်လျှင် ရပါရက်နဲ့ ခုလောက်သာ လုပ်သွားသည်။ ပြီးလျှင်လည်း ငွေကို ယူသွားသည်မဟုတ်။ သူ့နံမည်၊ သူ့အဖေနံမည်ဖြင့်ပင် စာသင်ကျောင်းကို လှူသွားခဲ့သည်။ ကျော်စွာ့ကို ပြန်တွေ့ခဲ့လျှင် သူကျူးလွန်ခဲ့သော အပြစ်တွေအတွက် ခုထက်ပို၍ သူ့ဘက်က ပေးဆပ် လိုပါကြောင်းတော့ဖြင့် ပြောလိုက်ချင်ပါ သေးသည်လေ။
(ဒီရက်ပိုင်း စာအသစ်ရေးဖို့ ဘယ်လိုမှ မဖြစ်နိုင်တာကြောင့် ဟိုးအရင်နှစ်က ရေးခဲ့တဲ့ ဒီဝတ္ထုလေးကို ပြန်တင်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ )
Posted by ချော(အစိမ်းရောင်လွင်ပြင်) at Wednesday, June 06, 2012 Wednesday, June 06, 2012 Labels: စိတ်ခွန်အားဖြည့်စာစုများ
လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်နှစ်ဆယ်ကျော်ကာလတုန်းက အိမ်ရှင်မ တစ်ယောက်ဟာ သူ့မိသားစု စားဖို့အတွက် ပေါင်မုန့်ဖုတ်နေပါတယ်။ အဲဒီလို ပေါင်မုန့်ဖုတ်နေရင်းမှာ စိတ်ကူးတစ်ခုရပြီး ပေါင်မုန့်အပိုတစ်လုံးကိုပါ ဖုတ်လိုက်ပါတယ်။ ပြီးတော့ အဲဒီပေါင်မုန့်ကို ဗိုက်ဆာနေတဲ့ တစ်ယောက်ယောက်များ ရှိခဲ့ရင် ယူသွားနိုင်ဖို့အတွက် သူတို့အိမ်ရှေ့ ပြူတင်းပေါက်မှာ ထားထားလိုက်ပါတယ်။ အဲဒီပေါင်မုန့်ကို ပြူတင်းပေါက်မှာ ထားထားရင်း အိမ်ကနေ အဝေးတစ်နေရာကို ထွက်သွားတဲ့ သူမရဲ့သားလေး အန္တရာယ်ကင်းရှင်းပါစေကြောင်း ဆုတောင်းတတ်ပါတယ်။ သူမရဲ့ သားလေးဟာ တိုးတက်ရာတိုးတက်ကြောင်း ရှာဖို့ဆိုပြီး မြို့ကို ထွက်သွားခဲ့တာ ကြာပါပြီ။ သို့သော်လည်း ခုချိန်မှာ စစ်ဖြစ်လာတဲ့အတွက် သတင်းမကြားရတာ ကြာပြီဖြစ်တဲ့ သူမ သားအတွက် ရတက်မအေးနိုင်အောင် ရှိနေခဲ့ရပါတယ်။ ဒါကြောင့်လည်း သူမသားလေး အန္တရာယ် ကင်းရှင်းအောင် ဆုတောင်းနေရတာ ဖြစ်ပါတယ်။
အိမ်ရှင်မရဲ့ ပေါင်မုန့်ကို ပြူတင်းပေါက်မှာ စထားတဲ့နေ့ကစပြီး လာလာယူတဲ့သူက ခါးကုန်းကုန်း ရုပ်ဆိုးဆိုး အဖိုးကြီးတစ်ယောက် ဖြစ်ပါတယ်တဲ့။ အဲဒီ အဖိုးကြီးဟာ ပေါင်မုန့်ကို ယူပြီးတိုင်း အိမ်ရှင်တွေကို ကျေးဇူးတင် ဝမ်းမြောက်တဲ့ အပြုအမူ ပြရမဲ့အစား စကားတစ်ခွန်း ကိုသာ ထပ်တလဲထဲ ရွတ်ဆိုပြီး အဝေးကို ထွက်ခွာသွားတတ်ပါတယ်။ သူဆိုသွားတဲ့ စကားက "မကောင်းတာလုပ်ရင် မကောင်းသလိုခံစားရမယ်။ ကောင်းတာလုပ်ရင်လည်း ကောင်းတာပြန်လာမယ်" ဆိုတဲ့ စကားဘဲဖြစ်ပါတယ်။
အိမ်ရှင်မဟာ နေ့တိုင်းနေ့တိုင်း ပေါင်မုန့်တစ်လုံးတစ်လုံး ပိုဖုတ်ပြီး ပြူတင်းပေါက်မှာ တင်ထားမြဲ တင်ထားပြီး သူမသားလေး ဘေးရန် ကင်းရှင်းပြီး ပြန်ရောက်လာစေကြောင်း ဆုတောင်းလေးရှိသလို ခါးကုန်ကြီးဟာလည်း နေ့စဉ်နေ့တိုင်း အဲဒီပေါင်မုန့်ကို လာလာ ယူမြဲဖြစ်ပါတယ်။ လာယူတိုင်းလည်း သူ့ပါးစပ်ကနေ "မကောင်းတာလုပ်ရင် မကောင်းသလိုခံစားရမယ်။ ကောင်းတာ လုပ်ရင်လည်း ကောင်းတာပြန်လာမယ်" ဆိုတဲ့စကားကို တဖွဖွ ရေရွတ်ပြီး ထွက်ခွာသွားလေ့ရှိပါတယ်။ အဲဒီအဖြစ်အပျက်ဟာ ကြာလာတဲ့အခါကျတော့ အိမ်ရှင်မရဲ့စိတ်ထဲမှာ ခံရခက်လာပါတယ်။ ပေါင်မုန့်ကို နေ့တိုင်းလာယူပေမဲ့ ကျေးဇူးတင်စကား၊ ကျေးဇူးတင်တဲ့ အမူအရာ တစ်ခွန်းမှ ပြောဖော်မရဘဲ သူ ပြောနေကျ စကားကိုသာ သူ့ဖာသူ တီးတိုး ရေရွတ် ပြောဆိုသွားခဲ့ပါတယ်။
"မကောင်းတာလုပ်ရင် မကောင်းသလိုခံစားရမယ်။ ကောင်းတာလုပ်ရင်လည်း ကောင်းတာပြန်လာမယ်" ဆိုတဲ့စကားကိုသာ ကြားနေရတော့ အိမ်ရှင်မဟာ ဒေါသထွက်သလို ဖြစ်လာပါတော့တယ်။ "ဒီခါးကုန်းကြီးဟာ နေ့တိုင်းနေ့တိုင်း ငါထားထားတဲ့ ပေါင်မုန့်လာလာယူပြီး ကျေးဇူးတင်စကားတစ်ခွန်းတောင် ပြောဖို့ မသိတတ်ဘူး ။ ဘာမဟုတ်တဲ့ စကားတွေဘဲ ပြောပြောသွားတယ်။ ဘယ်လိုလူစားမျိုးလဲ မသိဘူး" လို့ တွေးမိပြီး "ဒီလောက်တောင် ကျေးဇူး မသိတတ်၊ ကျေးဇူးတင်စကား ပြောဖို့ ဝန်လေးတတ်တဲ့ ဒီခါးကုန်းကြီး နောက်ကို ငါထားတဲ့ ပေါင်မုန့်တွေ လာမယူတော့ အောင် တစ်ခုခုလုပ်မှ ဖြစ်တော့မယ်" လို့ စိတ်ကူးရေရွတ်မိပါတယ်။
အဲဒီလိုနဲ့ မိုးခပ်ဖွဲဖွဲ ရွာနေတဲ့ တစ်ရက်မှာ အိမ်ရှင်မဟာ ပေါင်မုန့် အပိုတစ်လုံး ဖုတ်မဲ့အထဲကို အဆိပ်တစ်မျိုးကို ထည့်လိုက်ပါတယ်။ အဲဒီလို အဆိပ်ကိုထည့်ပြီး ဖုတ်မယ် ပြင်နေတုန်းမှာ အိမ်ရှင်မရဲ့လက်တွေဟာ တစ်ဆတ်ဆတ် တုန်ယင်လာပြီး " ငါ ဘာတွေ လုပ်ဖို့ စိတ်ကူးနေတာလဲ။ ပေါင်မုန့်ကို မရှိနွမ်းပါးသူ ဘယ်သူဘဲယူယူ ဆိုတဲ့ စိတ်ကူးနဲ့ ပြူတင်းပေါက်နားမှာ ထားဖို့ ငါ နေ့စဉ်ဖုတ်နေတာဘဲ။ ဒီခါးကုန်းကြီး ကျေးဇူးတင်တင် မတင်တင်၊ ငါစေတနာ ပျက်စရာလိုလို့လား " လို့ အသိတရား ပြန်ဝင်လာပြီး အဆိပ်ထည့်ထားတဲ့ ပေါင်မုန့်ကို မီးဖိုထဲ ပစ်ချလိုက်ပြီး နောက်ထပ် အသစ်တစ်လုံးကို ထပ်မံပြုလုပ်ပြီး ပြူတင်းပေါက်ပေါ် တင်ထားလိုက်ပါတော့တယ်။
လာနေကျအတိုင်း ခါးကုန်းကြီးပေါ်လာပြီး အိမ်ရှင်မထားထားတဲ့ ပေါင်မုန့်ကို ယူပြီး ခါတိုင်းလို "မကောင်းတာလုပ်ရင် မကောင်းသလိုခံစားရမယ်။ ကောင်းတာလုပ်ရင်လည်း ကောင်းတာပြန်လာမယ်" ဆိုတဲ့စကားကို ရေရွတ်ပြီး ထွက်သွားပြန်ပါတယ်။ အဲဒီနေ့ ညနေမှာတော့ သူမတို့ အိမ်တံခါးကို တစ်စုံတစ်ယောက်က လာခေါက်ပါတယ်။ တံခါးလည်း ဖွင့်လိုက်ရော အံ့သြစရာကို သူမ တွေ့လိုက်ရပါတယ်။ အဲဒါက စာမလာသတင်းမကြား အတန်ကြာ ပျောက်နေတဲ့ သူမရဲ့ သားဟာ တံခါးရှေ့ကို ရောက်နေခဲ့ပါပြီ။ သူမရဲ့သားဟာ ကျုံလှီ ပိန်ခြုံးနေပြီး အဝတ်အစားတွေဟာလည်း စုတ်ပြဲညစ်နွမ်းလို့ နေပါတယ်။ ပြီးတော့လည်း အင်အားချည့်နဲ့ မောပန်းပြီး အလွန်တရာမှာ ဆာလောင် ငတ်မွတ်နေတဲ့ ပုံ ပေါ်ပါတယ်။
သူမ သားလေးဟာ မိခင်ဖြစ်သူကိုလည်း မြင်ရော အားရဝမ်းသာ ပြေးဖက်လိုက်ပြီး " မေမေရယ် ကျွန်တော်ဖြင့် အိမ်ကိုတောင် ပြန်မှ ရောက်ပါတော့မလားလို့ ။ ခုမှဘဲ စိတ်အေးရတော့တယ်" လို့ ပြောလိုက်တော့ မိခင်ဖြစ်သူက "ဘာတွေများဖြစ်ခဲ့လဲ သားရယ်.. မေမေ့ကို ပြောပြပါဦး" လို့ ပြန်မေးပါတယ်။ သားဖြစ်သူက " ကျွန်တော် မြို့ကနေ ပြန်လာတဲ့ လမ်းတစ်လျှောက်လုံး တိုက်ပွဲတွေကို ရှောင်ကွင်းပြီးလာခဲ့ရတယ်။ တောထဲ တောင်ထဲကိုလည်း ဖြတ်ခဲ့ရတယ်။ အိမ်နဲ့ သိပ်မဝေးတော့တဲ့ နေရာရောက်တော့ ကျွန်တော့်မှာ ဘာမှ စားစရာမရှိတော့ဘူး ဝယ်စားဖို့ ငွေလည်း မရှိတော့ဘူး။ အစာမစားရတာ ကြာတော့ အားပြတ်ပြီး လဲကျတော့မလို ဖြစ်နေခဲ့တယ်။ ကျွန်တော်တော့ သေတော့မယ်လို့ကို အောက်မေ့တော့တာဘဲ။ အဲဒါ ဒီမနက်မှာ ခါးကုန်းအဖိုးကြီးတစ်ယောက်က ကျွန်တော့်ဘေးကနေ ဖြတ်သွားတော့ သူ့လက်ထဲမှာ ကိုင်လာတဲ့ ပေါင်မုန့်တစ်လုံးကိုတွေ့လိုက်ရလို့ ကျွန်တော်လည်း ပေါင်မုန့်တစ်ဖဲ့လောက် ကျွေးပါလို့ တောင်းပန်ပါတယ်" လို့ ပြောပြပါတယ်။
အဲဒီတော့ ခါးကုန်းကြီးက ပေါင်မုန့်ကို သားကို ကျွေးရဲ့လား လို့ မိခင်က မေးတော့ "ဟုတ်တယ် မေမေ။ ခါးကုန်းကြီးဟာ ကျွန်တော့်ကို သူ့လက်ထဲက ပေါင်မုန့်တစ်လုံးလုံးကို ပေးခဲ့ပြီး " ဒီပေါင်မုန့်ဟာ ငါနေ့တိုင်း စားနေကျရိက္ခာဘဲ။ ဒါပေမဲ့ ဒီပေါင်မုန့်တစ်လုံးလုံး မင်းကို ပေးခဲ့ပါမယ်. ဘာဖြစ်လို့လဲ ဆိုတော့ ခုချိန်မှာ ငါ့ထက် မင်းက ဒီပေါင်မုန့်တစ်လုံးကို ပိုလိုအပ်နေတဲ့သူ ဖြစ်နေလို့ပါဘဲ" လို့ ပြောသွားခဲ့တာပါ။ ကတယ်ကို ကျွန်တော့်ရဲ့ အသက်သခင်လို့ ပြောရမယ် မေမေရေ. အဲဒီပေါင်မုန့်သာ ကျွန်တော် မစားရရင် ဒီကိုတောင် ရောက်အောင် လာနိုင်ဖို့ မမြင်တော့ပါဘူး။ ကျွန်တော်ဟာ အစာငတ်ပြီး သေရုံသာ ရှိပါတော့တယ် လို့ ပြောပြလိုက်ပါတယ်။
သားရဲ့ စကားကို ကြားရတော့ မိခင်ဖြစ်သူက အံ့သြထိတ်လန့်ပြီး မျက်နှာတစ်ခုလုံး ဖြူဖျော့ပြီး မူးမေ့လဲကျမတတ် ခံစားလိုက်ရတဲ့အတွက် တံခါးဘောင်ကို လှမ်းထိန်းလိုက်ရပါတယ်။ သူမဟာ ဒီမနက်မှာ ပေါင်မုန့်ထဲကို အဆိပ်ထည့်ပြီး ဖုတ်ဖို့ လုပ်ခဲ့မိပါသေးတယ်။ ဒီမနက်မှာ အဲဒီပေါင်မုန့်ကို ခါးကုန်းကြီးကသာ ယူသွားမိခဲ့ရင် အဆိပ်ထည့်ထားတဲ့ ပေါင်မုန့်ကို စားမိသူက သူမရဲ့ အချစ်ဆုံး သားလေးဖြစ်မှာ အသေအချာပါ။ အဲဒီလိုသာဆိုရင် သူမ သားလေးကိုလည်း ဆုံးရှုံးရဖို့ သေချာသလောက် ရှိပါတယ်။ အဲဒီတော့မှ ခါးကုန်းကြီး ပြောပြောသွားတဲ့ "မကောင်းတာလုပ်ရင် မကောင်းသလိုခံစားရမယ်။ ကောင်းတာလုပ်ရင်လည်း ကောင်းတာပြန်လာမယ်" ဆိုတဲ့စကားရဲ့ အဓိပ္ပါယ်ကို သဘောပေါက် နားလည်မိရပါတော့တယ်။
ခါးကုန်းကြီးကို အဆိပ်မိစေချင်စိတ်နဲ့သာ ပေါင်မုန့်ထဲ အဆိပ်ထည့်ပြီးသာ ဖုတ်ခဲ့မိရင် အဲဒီမကောင်းတဲ့ စိတ်ထားရဲ့ အကျိုးဆက်ဟာ သူမသာ ပြန်ခံစားရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ခုတော့ မကောင်းတဲ့စိတ်ရိုင်းကို ဖယ်ပြီး စိတ်ကောင်းကောင်းဖြင့် ပေါင်မုန့်အကောင်းကိုသာ ဖုတ်ဖြစ်ခဲ့တဲ့အတွက် သူမသားလေး ပြန်ရောက် လာနိုင်ခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ သူမပြူတင်းပေါက်မှာ နေ့စဉ်ထားဖြစ်ခဲ့တဲ့ ပေါင်မုန့်ကလေးက သူမသားအသက်ကို ကယ်လိုက်တာသာ ဖြစ်ပါတော့တယ်။ မိခင်ဖြစ်သူဟာ သူမရဲ့ တစ်သက်တာမှာ မကောင်းမှုကိုလုပ်ဖို့ ဘယ်တော့မှ ကြံစည်ဖြစ်တော့မှာ မဟုတ်တာ သေချာပါတယ်။
ကောင်းမှုတစ်ခုခု(သို့မဟုတ်) ကောင်းသည်၊ မှန်သည်ဟု မိမိလေးနက်စွာ ယုံကြည်ထားသည့် အရာတစ်ခုခုကို ပြုလုပ်သည့်အခါ မည်သူ တစ်ဦးတစ်ယောက်ကမျှ အသိပြုသည် ဖြစ်စေ၊ မပြုသည် ဖြစ်စေ၊ ချီးကျူးခြင်း၊ ထုတ်ဖော်ပြောဆိုခြင်း ပြုသည် ဖြစ်စေ၊ မပြုသည် ဖြစ်စေ၊ မိမိလုပ်လက်စ ကောင်းမှုဟု မိမိယုံကြည်သော အလုပ်ကို ပြုလုပ်မြဲ ဆက်ပြုလုပ်ပါ။ ထိုကောင်းမှုနှင့် ထိုက်တန်သော ကောင်းကျိုးကို တစ်နေ့နေ့တစ်ချိန်ချိန်တွင် သင်ကိုယ်တိုင် သေချာပေါက် ပြန်လည်ခံစားရမည်ဖြစ်သည်။
The Good You Do, Comes Back To You ( Author Unknown) ကို ဘာသာပြန်ပါသည်။ အားလုံးဘဲ ကောင်းကျိုးချမ်းသာ လိုရာဆန္ဒ ပြည့်ဝကြပါစေရှင်။
Links to this post 16 comments
စကျဘီးစီးခွငျး အနုပညာ …